ထိုင်းမှာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေ အတွင်း ပစ်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွား
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အစိုးရက စီစဉ်ထားတဲ့ မနက်ဖြန် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် ဒီကနေ့မှာ အစိုးရ ဆန့်ကျင်သူတွေနဲ့ ထောက်ခံသူတွေ အကြား ဘန်ကောက်မြို့မှာ တဘက်နဲ့ တဘ်က ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် အကြမ်းဖက် မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ၊ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်တာတွေ နဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေပါ ဖြစ်ပွားခဲ့ ပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့ မြောက်ဘက်ပိုင်း ထိပ်တိုင်ရင်ဆိုင်ပွဲ မှာတော့ ဗုံးတွေပစ်သွင်း သေနတ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်မှုတွေ ကြောင့် လူအတော်များ များ ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီရွေးကောက်ပွဲကို အဓိက အတိုက် အခံ ပါတီက သပိတ်မှောက် ထားပြီး၊ ရွေးကောက်ခံတွေ မပါတဲ့ ကြားဖြတ် ပြည်သူ့ကောင်စီမျိုးနဲ့ လက်ရှိအစိုးရကို အစားထိုးဖို့ကို တောင်းဆို ထားပါတယ်။
အတိုက်အခံ ထောက်ခံသူတွေဟာ မဲပြားတွေ ဖြန့်ဝေ နေတာတွေကိုလည်း လိုက်လံ တားဆီး ပိတ်ပင်မှုတွေ ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။
ကိုယ် ဘယ်လို ခံစားနေရလဲဆိုတာကို ဒီပုံလေးကြည့်ပြီး
ပြောလို့ ရပါတယ်ဗျာ ...
တော်တော် အသုံးဝင်တဲ့ ပုံလေးပါ ....
Aggressive = စိတ်တိုသော
Anxious = စိုးရိမ်သောကရောက်နေသော
Arrogant = စိတ်ကြီးဝင်နေသော ၊ မာနတက်နေသော
Bashful = ရှက်သော
Blissful = အလွန်ပျော်နေသော၊အူမြူးနေသော
Bored = ငြီးငွေ့နေသော
Confident= ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသော
Curious = စပ်စုချင်နေသော၊သိချင်စိတ်ပြင်းပြသော
Determined = စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသော
Disappointed = စိတ်မချမ်းသာသော၊စိတ်ပျက်သော
Disapproving = သဘောမကျသော
Enraged = ဒေါသထွက်သော
Envious = အားကျသော၊မနာလိုဖြစ်သော
Exasperated = စိတ်တိုနေသော
Frightened = အလိတ်တလန့်ဖြစ်နေသော၊ကြောက်နေသော
Frustrated = အဆင်မပြေသော
Grieving = ၀မ်းနည်းကြေကွဲနေသော
Happy = ပျော်သော
Horrified = ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေသော
Hungover = အရက်နာကျနေသော
Hurt = စိတ်ထိခိုက်နေသော
Indifferent = စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသော
Idiotic = မိုက်မဲသော
Innocent = အပြစ်ကင်းသော
Interested = စိတ်ဝင်စားသော
Jealous = မနာလိုဖြစ်နေသော
Joyful = ပျော်မြူးနေသော
Lonely = အထီးကျန်နေသော
Meditative = အလေးအနက်တွေးတောနေသော
Miserable = စိတ်မချမ်းမြေ့သော
Obstinate = အလျှော့မပေးသော၊ခေါင်းမာသော
Optimistic = အကောင်းမြင်သော
Paranoid = သူတစ်ပါးပေါ် သံသယစိတ် လွန်ကဲသော။
Perplexed = ဦးနှောက်ခြောက်နေသော
Prudish = အဖြစ်သည်းနေသော
Puzzled = အကြံအိုက်နေသော
Regretful = ၀မ်းပန်းတနဲ ဖြစ်နေသော
Relieved = စိတ်အေးနေသော
Sad = ၀မ်းနည်းသော
Satisfied = ကျေနပ်သော၊အားရသော
Shocked = တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေသော
Sheepish = ရှက်ကိုးရှကန်းဖြစ်နေသော၊မလုံမလဲဖြစ်နေသော
Snobby = ဇီဇာကြောင်သော
Surprised = အံ့အားသင့်သော
Suspicious = သံသယ၀င်နေသော
Sympathetic = စာနာထောက်ထားသော၊ကိုယ်ချင်းစာသော
Thoughtful = အတွေးနယ်ချဲ့နေသော
Undecided = ချီတုံချတုံဖြစ်နေသော၊ဆုံးဖြတ်ရခက်နေသော
Withdrawn = အထီးတည်းနေလိုသော
အင်တာနက်ပေါ်က စုဆောင်းထားတာလေးပါ ။
ရှယ် ပါ ဗျာ ။
English ဘာသာစကား အရံအတားကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့
ဆောက်တာဟာ အန္တရာယ်အလွန်ကြီးတယ်။ ဘာပြုလို့လည်းဆိုတော့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် မြစ်ဆုံတာပေါ်မှာ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာတော့မှာဖြစ်တယ်။
အဓိက (၂)မျိုးဖြစ်လာမယ်။ အချို့နှစ်တွေမျာ မိုးခေါင်မယ်၊ခြောက်သွေ့မယ်။ ဥပမာ အယ်လ်နီညိုနှစ်တွေလိုပေါ့။
အချို့နှစ်တွေမှာ စွတ်စိုမယ်၊ ရေကြီးမယ်။ ဥပမာ လာနီညာနှစ်တွေလိုပေါ့။
မိုးတွေနည်းပြီး မိုးခေါင်တော့ ရေအားလျပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှု နဲ့ ရေပေးဝေမှုတွေ ကလျော့ကျလာမယ်။
ရေတွေကြီးတော့ တာရဲ့လုံခြုံရေး (Safety, security) ပြဿနာတွေ ရှိလာမယ်။
ဒါတွေအားလုံးဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်ဘေးလုံခြုံမှု၊ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး။ လူမှုရေးတွေ အားလုံးအပေါ်မှာ ထိခိုက်စေတော့မှာ အမှန်ပါဘဲ။
UK, Hadley Centre က မြန်မာနိုင်ငံမှာ သက္ကရာဇ် ၂၁၀၀ မှာ ပျမ်းမျှအပူချိန်5C တိုး လာမယ်လို့မှန်းထားပါတယ်။
အပူချိန် 1 deg C လောက် တက်ရင်ကို လူတွေမှာရေအခက်အခဲ(Water Stress) တွေ စတင်ကြုံတွေ့ရမယ်၊
အပူချိန်2deg C လောက် တက်ရင်ကို ရေ Water runoff တွေ တိုးလာစေမယ်၊
အပူချိန်3deg C လောက် တက်ရင်ကို Water Resources တွေ လျော့ကျ လာစေ လိမ့်မယ်
ဒီတော့ ခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်း ဧရာဝတီရဲ့ ရေဝေရေလဲ
ဒေသတွေမှာ အပူချိန်5deg C သာတိုးလာခဲ့ရင်
ဧရာဝတီရဲ့ ရေအောက် Water Resources တွေ နဲ့ ဟိမ၀န္တာတောင်ခြေကရေခဲမြစ်တွေ ဘယ်လိုရှိမယ်
အဲဒီမှာ မြစ်ဆုံတာကြီးက ရေတွေကစိတ်တိုင်းကျ ပိတ်ဟယ်၊ ဆီးဟယ် နဲ့ လုပ်နေခဲ့ရင် မြစ်အောက်အစုံတလျှောက် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအထိ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ ကြားဘူးတယ် မဟုတ်လား၊ ရေနည်းငါး ဆိုတာလေ။
မိခင်ဧရာဝတီလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ လောဘသားတွေရဲ့ အဆင်ခြင်တုံတရားမဲ့ မှုကြောင့် တရုတ်ပြည်က ယန်ဇီမြစ်လို ပင်လယ်ဝနဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းခံလိုက်ရလို့ Dying River တစ်ခုအဖြစ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရောက်ရှိလာစေမယ်ဆိုတာ....။
Ooredoo မှ မြို့ကြီး သုံးမြို့ တွင် (၁၅၀၀) တန် ဆင်းမ်ကတ် များ စတင် ရောင်းချမည်
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင် ရရှိပြီး နောက် Ooredoo Myanmar မှ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် မြို့ ကြီး သုံးမြို့ တွင် (၁၅၀၀) တန် ဆင်းမ်ကတ် များ စတင် ရောင်းချ သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ ၏ CEO Mr. Ross Cormack က ပြောသည်။ ကျွန်တော် တို့ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ခွင့် လိုင်စင် ရရှိပြီး နောက် ပိုင်းမှာ အရင်ဆုံး မန္တလေး ကနေ စပြီးတော့ ရန်ကုန်-နေပြည် တော် ကို စတင် လုပ်ဆောင် သွားမယ်။ ဖုန်းဆင်း မ်ကတ် အနေ အထား အရ ဘယ် လောက်လဲ ဆိုတာ တော့ ကျွန်တော် အတိ အကျ မပြော နိုင် ပေမယ့် ၊ အ ကြမ်း ဖျင်းအား ဖြင့် (၁၅၀၀) ကျပ် နဲ့ စတင် မယ်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည် တော် မြို့ကြီး သုံးမြို့ မှာ (၁၅၀၀) တန် ဆင်းမ်ကတ် တွေ စတင် ရောင်းချ သွားမယ်။ ကျွန်တော် တို့ တာဝါတိုင် တွေ ဆောက် ရ ဦးမယ်။ အချိန် အတိ အကျ ကတော့ အခု ပြောဖို့ ခက်နေ သေးတယ် ဟု ၎င်း က ပြောသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါ ရီ လတွင် ဆက် သွယ်ရေး၊ သတင်း အချက် အလက် နှင့် နည်း ပညာ ၀န်ကြီး ဌာန အနေ ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး Operator ရွေးချယ်မှု ကို စတင်ခဲ့ပြီး၊ သတင်း စာ၊ ဂျာနယ် နှင့် မြန်မာ သံရုံး များမှ တစ်ဆင့် တစ်ကမ္ဘာ လုံးသို့ ကြေညာ ခဲ့ရာ နိုင်ငံ အသီး သီးမှ လျှောက်လွှာ ပေါင်း (၉၁) စောင် လာရောက် လျှောက် ထား ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ ယင်းတို့ အနက် Ooredoo နှင့် Telenor တို့ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင် (၂၇) ရက် နေ့ တွင် ရွေးချယ် ခဲ့ ပြီး၊ နောက် ၂၀၁၄ ဇန်န၀ါရီ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် ခွင့် စာချုပ် ကို Ooredoo နှင့် ချုပ်ဆို နိုင်ခဲ့ ကြောင်း သိရ သည်။ ကျွန်တော် တို့နဲ့ ဒီ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခု က ကတိက ၀တ်တွေ ထားပြီး တော့ စာချုပ် ကို ချုပ်ဆို ထား တာပါ။ သူတို့တွေ ထဲက စည်းကမ်း ဖောက် ဖျက်မယ်၊ ပြောတဲ့ ကတိ မတည် ဘူး ဆိုရင် သုံးကြိမ် တိတိ သတိ ပေးပါ့ မယ်။
ဒါမှ သူတို့ဘက်က မပြင်ဘူး။ မလုပ် ဆောင် ဘူး ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် တို့ လိုင်စင် ပြန်သိမ်း တဲ့ အထိ အရေးယူ ဆောင်ရွက် သွားမှာပါ။ သူတို့ လည်း ဒီမှာ အကြီးမား ဆုံးလာ ရောက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ တာ ဆိုတော့ ဒီ လို မဟုတ်တာ မမှန် တာတွေ လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး””ဟု ဆက်သွယ် ရေး၊ သတင်း အချက် အလက် နှင့် နည်း ပညာ ၀န်ကြီး ဌာန မှ ဒုတိယ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်က ပြောသည်။ ဆက်သွယ်ရေး၊ သတင်း အချက် အ လက် နှင့် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန နေ အဖြင့် Ooredoo ကုမ္ပဏီ နှင့် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင် လက်မှတ် ရေး ထိုး ခွင့်ပြု ခဲ့ ပြီးနောက် Telenor ကုမ္ပဏီအား လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီ လဆန်းပိုင်း တွင် ဆက်လက် ခွင့်ပြု သွား မည် ဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံ အများအပြားတွင် လုပ်ဆောင်ကြသည့် ဖွံ့ ဖြိုးရေးသည် အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်တို့နှင့် တူအောင် လိုက်လုပ်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၅ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီးတွင် ကိုလိုနီ နိုင်ငံကြီးများသည် စစ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ ရှုံးသည်ဖြစ်စေ စစ်ဒဏ်ကြောင့် ချည့်နဲ့သွားသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်တည် ဆောက်ကြရသည်။ ကိုယ်လွတ် ရုန်းရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ကိုလိုနီနယ်များကို ဖြေလွှတ်လိုက်သည့် အတွက် အာဖရိက၊ အာရှမှ ကိုလိုနီတို့ လွတ်လပ်ရေး ရလာကြသည်။ ပေါ်ထွန်းလာသော နိုင်ငံသစ်များသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကြံလာကြသည်။ သူတို့၏ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ဗျူဟာမှာ ရိုးရှင်းသည်။ သူတို့၏ အရှင်သခင်ဟောင်းများကို အမီလိုက်ရန်။ အရှင်သခင်ဟောင်းတို့ နှစ် ၁၀၀ တည်ဆောက်မှ ရသည့် ရည်မှန်းချက်တို့ကို ၁၀ နှစ်နှင့် ရအောင် လုပ်မည်ဟု တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်တစ်ဖြစ်လဲ သမ္မတ၊ ဝန်ကြီးချုပ်တို့က ကြုံးဝါးကြသည်။ သူတို့၏ ကြုံးဝါးချက်ကို သေချာ ဆန်းစစ် လိုက်သည့်အခါ အရှင်သခင်ဟောင်းတို့ကို အတုယူ လိုခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်စ နိုင်ငံတို့သည် ကိုယ့်မြေကိုယ်ရေတွင် အရှင်သခင် ပြန်ဖြစ်လာသော်လည်း အောက်ကျ နောက်ကျစိတ်က ကြီးစိုးနေသည်။ အရှင်သခင်ဟောင်းတို့ ကြိုက်သော အရာများသည် ကောင်းသည်၊ အရှင်သခင်ဟောင်းတို့ ဆောင်ရွက်သမျှသည် အတုခိုးသင့်သည် ဟူသော စိတ်သည် ထုတ်မပြောသော်လည်း ကိန်းအောင်းနေသည်။
ထိုသို့ အတုခိုး လုပ်ဆောင်ကြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးသည် အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်တို့ကဲ့သို့ လိုက်လံ ဖွံ့ဖြိုးရေးပင် ဖြစ်လာသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သည့် လူနေမှုပုံစံ အကောင်းဆုံးလဲ၊ အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်တို့၏ လူနေမှု ပုံစံ ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီ တိုးတက်ရေးသည် အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်တွေနှင့် တူအောင် လုပ်ရေး။ သူတို့နှင့် မတူသေးသမျှ မဖွံ့ဖြိုးသေး။ ထို့ကြောင့် ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး Modernization သည် အနောက်တိုင်းနှင့် တူအောင် လုပ်ခြင်း Westernization ဖြစ်လာသည်။ အနောက်တိုင်းတွင်မှ အနောက်တိုင်း၏ ထိပ်သီး မည်သူနည်း။ ယခင်က အနောက်တိုင်း၏ ခေါင်းဆောင်သည် နေမဝင် အင်ပါယာ အရှင် အင်္ဂလိပ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီးတွင်မူ အမေရိကန်။ ထိုကြောင့် Westernization သည်လည်း Americanization အမေရိကန်နှင့်တူအောင် လုပ်ခြင်း ဖြစ်လာသည်။
ဖွံ့ဖြိုးရေး ပုံစံတို့တွင်လည်း အမေရိကန် ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အတုယူထားသည့် မော်ဒယ်လ်က ကြီးစိုးလာသည်။ အမေရိကန် မော်ဒယ်လ် မဟုတ်လျှင်လည်း အခြားနိုင်ငံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အမေရိကန်တို့က အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ကြသည်။ ကမ္ဘာနှင့်ချီသည့် ဖွံ့ ဖြိုးရေး အေဂျင်စီကြီးများ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့၊ ကုလသမဂ္ဂတို့ကိုလည်း အမေရိကန်က ကြီးစိုးလျှင် ကြီးစိုး၊ မကြီးစိုးလျှင်လည်း သြဇာညောင်းသည့် အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးသည် အမေရိကန် အလိုကျ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖြစ်လာသည်။ သြဇာကြီးမားသည့် ဥာဏ်ကြီးရှင်အဖွဲ့များ Think Tank များသည်လည်း အမေရိကန်တွင် အခြေစိုက်ကြ သည့်အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် အမေရိကန် အတွေးအခေါ်များသာ အရာရောက်ကြသည်။
တစ်နေရာမှတစ်နေရာ သတင်းအချက်အလက်တို့ အမြန်ရောက်သည့်ခေတ် ဖြစ်လာသည့်အတွက် ယဉ်ကျေးမှုပိုင်းနှင့် အိုင်ဒီယာ ပိုင်းတွင်လည်း နိုင်သူ အကုန်ယူကြေး ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ဟောလိဝုဒ်သည် ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်လောကကို ကြီးစိုးသည့်အတွက် ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်များသည် ဖွံ့ဖြိုးရေး အိပ်မက် ဖြစ်လာသည်။ ကိုကာကိုလာ သောက်၊ ကြက်ကြော်စား၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ ဝတ်လိုက်လျှင် တစ်စုံတစ်ခု ပြည့်စုံသလို ခံစားလာကြရသည်။ အမေရိကန်သို့ တစ်ခါမျှ မရောက်ဖူးဘဲနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများမှ လူအများသည် အမေရိကန် ဖြစ်လာကြသည်။ အမေရိကန် ရုပ်သံ၊ သတင်းစာများသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ရောက်သည့်အတွက် အမေရိကန်တို့ မျက်စိဖြင့် ကြည့်သည့် သတင်းအာဘော်များ အတိုင်း လူတို့ လိုက်လံ စဉ်းစား ကြကုန်သည်။ မှန်သည် မမှန်သည် အပထား၊ အမေရိကန်တို့ မြင်သလို လူတို့ မြင်ကုန်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဖွံ့ဖြိုးရန် ယခုမှ ရုန်းကန်ထရသော နိုင်ငံငယ်လေး ဖြစ်သည့်အတွက် အင်အားကြီးမားသော နိုင်ငံကြီးများပင် မလွန်ဆန်နိုင်သည့် နိယာမကို ကျော်လွန်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။ အခြားနိုင်ငံများကို သက်ရောက်သော အင်အားစုကြီးများသည် မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း လာရောက် သြဇာ လွှမ်းမိုး လျက်ရှိသည်။ ထိုသို့ လွှမ်းမိုး ကြီးစိုးခြင်းသည် သဘာဝသာ ဖြစ်သောကြောင့် တမင်တကာ ရုန်းကန် တွန်းလှန်ရန် မလို။ ကိုယ်နှင့် ကိုက်သည်ကိုသာယူပြီး မကိုက်သည့်အရာကို ပယ်ရန်သာ လိုသည်။
ကိုယ့်နည်းကိုယ်ဟန် သုံးကာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သွားသော ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံဟောင်းများကို လေ့လာခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကျိုးများမည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဘဝမှ တက်လာသော အောင်မြင် ဖွံ့ဖြိုး နိုင်ငံများသည် အခြားသူတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အကြံဥာဏ်ကို ရနိုင်သလောက် ယူခဲ့သော်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကိုယ်တိုင်သာ ချမှတ်ခဲ့သည်။ ကွဲလွဲရမည်ကို မကြောက်ဘဲ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက်သာ ကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်သောကြောင့် ထိုနိုင်ငံများ ယနေ့သူတို့ ရထားသော နေရာများသို့ ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းတိုင်း၊ နိုင်ငံတိုင်းသည် ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ် မည်သို့ပင် စေတနာရှိသည် ဆိုငြားသော်လည်း သူတို့တွင် ကိုယ်ပိုင် အကျိုးစီးပွားများ၊ အကြံအစည်များ ရှိတတ်ရာ ကိုယ့်နိုင်ငံ အကျိုးစီးပွားကိုသာ ကြည့်ပြီး အားမနာဘဲ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။
အမှန်တကယ်တော့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို လူတို့က အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်သည်။ လူတို့ကပင် ဖော်ဆောင် တည်ဆောက် ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခေတ် တစ်ခါတွင် လွှမ်းမိုး အင်အားကောင်းသော အင်အားစုတို့၏ အတွေးအကြံများနောက် အတုယူမိ၊ လိုက်ပါမိသည်မှာလည်း သဘာဝဖြစ်သည်။ သတိထားရမည့် တစ်ခုတည်းသော အရာမှာ “သူ့အိုး သူ့ဆန်”နှင့် “သူ့အရပ်နှင့် သူ့ဇာတ်” ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးချီ ဖွံ့ဖြိုးမှုရေစီးကို ဆန့်ကျင် ကူးခတ်လျှင် လူမိုက်။ သို့သော် ရေစီးတွင် ရောက်လိုရာရောက် စိတ်နှလုံး ဒုံးဒုံးချကာ မျှောလိုက်ခြင်းသည်လည်း လူမိုက်ပင်။ ရေစီးကို အလိုက်သင့်လိုက်ကာ လိုရာ ရောက်နိုင်ရန် ကျွမ်းကျင် လိမ္မာရမည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကာလရှည်ကြာသော သမိုင်းကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှု ရှိသည့်အတွက် ကိုယ်နှင့် လိုက်ဖက်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုသာ ဖော်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ သူတစ်ပါးကိုသာ အတုခိုးလျှင် တစ်ပတ်နွမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သာ နှစ်ပါးသွားရလိမ့်မည်။ ယူသင့်သည်ကိုယူ၊ ပယ်သင့်သည်ကို ပယ်ပြီး ချီတက်ရလိမ့်မည်။
ဖွံ့ဖြိုးရေးသည် အရန်သင့်ဝတ် အင်္ကျီ ready-made မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးသည် အခြားနိုင်ငံများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် တစ်ထပ်တည်း တူရန် မလို။ လုံးဝ လုံးဝ မလိုပါ။ မြန်မာ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုက်ညီသော၊ မြန်မာ့ရေမြေနှင့် အစပ်အဟပ် တည့်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးသာ ဖြစ်ရန် လိုပါသည်။ မြန်မာလူနာကြီး နာလန်ထရန်အတွက် ယနေ့ လာရောက် ညွှန်းဆိုကြသော ဆေးအညွှန်းမျိုးစုံတို့သည် အခြားလူနာတို့နှင့် ကိုက်ညီသည့် ပွဲတွေ့ဆေးများ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း မြန်မာလူနာကို သက်သာ ပျောက်ကင်းစေမည်ဟု တစ်ထစ်ချ ပြောနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ပုံစံတူရန် မလိုပါ။ ပုံစံကွဲလွဲ၊ သီးသီးသန့်သန့် ဖြစ်နေရန်လည်း မလိုပါ။ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် မြန်မာတို့နှင့် ကိုက်ညီရန်သာ လိုသည်။
ဘာသာရေး ကိုးကွယ်မှုဟူသည် မွေးရာပါ အခွင့်အရေးဟု လွှတ်တော်အမတ် ထောက်ပြ
ဓာတ်ပုံ - မြန်မာနိုင်ငံ ကိုးကွယ်မှုပြ ဇယား
စိုးသန်းလင်း၊ မင်းမင်း|ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ သောကြာနေ့၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်
၂၀၁၄-၁၅ အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းပါ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မူနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ အပေါ် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးရာ ဥပဒေကြမ်း၏ ရည်မှန်းချက်ပါ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန်္ဒူ နှင့် နတ်ကိုးကွယ်မှုများအား လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ပြုရန်” ဟူသည့် စာသားကို ဖြုတ်သင့်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့သည်။
“အဲ့ဒီ စာသားတွေကို ပယ်ဖျက်ချင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီစာသားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မထည့် ထားတာဟာ တခြားဘာသာတွေကို ကွပ်ကဲသလိုဖြစ်သွားတယ်။ နောက်ပြီး သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန က ခွင့်ပြုမှ ကိုးကွယ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ မွေးရာပါအခွင့်အရေးပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘာသာကို ခွင့်မပြု လည်း ကျွန်တော်တို့ကတော့ အသေခံပြီး ကိုးကွယ်သွားမှာပါ” ဟု ချင်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် (၂) မှ လွှတ် တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇုန်လှယ်ထန်းက ထောက်ပြပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်သော သာသနာပြု လုပ်ငန်းများ အားလုံး ကို ပယ်ဖျက်ပေးသင့်ကြောင်းလည်း ၎င်းက တောင်းဆိုခဲ့သည်။
“သာသနာပြုအလုပ်ဟာ အစိုးရအလုပ် မဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရဟာ အခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့အတိုင်း ဘာသာ ပေါင်းစုံကို ကူညီဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သာသနာပြုရန် ရည်ရွယ်တဲ့ပုဒ်မတွေကို အကုန်လုံး ပယ်ဖျက် ပေးစေချင်ပါတယ်” ဟု ဦးဇုန်လှယ်ထန်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှတစ်ဆင့် အစိုးရအဖွဲ့သို့ တောင်း ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၆၃တွင် “ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ အစ္စလာမ် ဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘာ သာတို့ကို တတ်နိုင်သမျှ အားပေးကူညီစောင့်ရှောက်မည်” ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း နိုင်ငံတွင်းရှိ ဘာ သာစုံတို့အား ဥပဒေနှင့်အညီ မျှမျှတတ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကူညီနိုင်ရန်အတွက်လည်း မင်းတပ်မဲဆန္ဒ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထန်းလိန်းက ဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့သည်။
“ဘာသာ သာသနာများကို ဥပဒေနဲ့ အညီ တရားမျှတစွာ ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ သာသနာရေးဝန်ကြီး ဌာနကို တိုးချဲ့ဖွဲ့ စည်းသင့်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ဦးစီးဌာနများတိုးချဲ့ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာရေးဦးစီး ဌာန၊ အစ္စလာမ် ဘာသာသာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ ဟိန္ဒူဘာ သာသာသနာရေးဦးစီးဌာနနှင့် နတ်ကိုးကွယ် မှုဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနစသဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့ စည်းသင့်သည်ဟု ၎င်းကရှင်းလင်းပြောသွားသည်။
ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့်မညီသည့်စီမံကိန်းများ ဆိုင်းငံ့၊ ပယ်ဖျက်မည်ဟု လွှတ်တော်ကော်မတီဆို
ဓာတ်ပုံ - မြစ်ဆုံ စီမံကိန်း
ဉဏ်လှိုင်လင်း၊ အောင်သူရထွန်း|ဇန်န၀ါရီ ၃၁၊ သောကြာနေ့၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်
အစိုးရအဖွဲ့တင်ပြထားသည့် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှု များကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၌ စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် မကိုက်ညီဘဲ နိုင်ငံ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု မရှိစေသည့် စီမံကိန်းများကို ဆိုင်းငံ့ပယ်ဖျက်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီဝင် ဦးမြင့်ထွန်းက ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက် တွင် လွှတ်တော်သို့ တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့သည်။
“၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ရန်လျာထားသော စီမံကိန်းများမှ ပြည်သူ့ဆန္ဒနှင့် မကိုက် ညီသော နိုင်ငံ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိသော စီမံကိန်းများကို ဆိုင်းငံ့၊ ပယ်ဖျက်၍ ပြည်သူများ လိုလားချက်ရှိ သော စီမံကိန်းများကို အချိန်တိုအတွင်း ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းအပေါ် ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လေ့လာစိစစ်တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရင်း ဦးမြင့်ထွန်းက ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာတွင်မူ နိုင်ငံ၏စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အကျိုးအမြတ် ပြန်လည်ရရှိ မှုပေါ်တွင် မူတည်သော်လည်း စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှုအပြင် လူမှုရေးအကျိုး ဖြစ်ထွန်းမှုကိုလည်းထည့် သွင်းစဉ်းစားရန် လိုသည်ဟု သုံးသပ်ထားသည်။
ထို့ပြင် အစိုးရအဖွဲ့ တင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းများတွင် စီမံကိန်းအခြေအနေ အချုပ်ဖော်ပြသည့် အချက် အလက်များ မပါဝင်သည့်အတွက် လွှတ်တော်အနေဖြင့် အဆိုပါဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ပြီးစီးနိုင်မည့် စီမံကိန်း အခြေအနေကို မသိရှိနိုင်ဟုလည်း အစီရင်ခံစာကဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းများကို သတ်မှတ်ကာလ အတွင်း ဘတ်ဂျက် ထည့်သွင်းရေးဆွဲ၍ အပြီးဆောင်ရွက်ရန် ၀န်ကြီးဌာနအလိုက် ဦးစားပေး အစီအစဉ် များ ချမှတ်ထားပြီး ဘဏ္ဍာငွေ ခွင့်ပြုနိုင်သည့်အနေအထားတွင် မူတည်၍ စီမံကိန်းအသစ်များဆောင်ရွက် ရန် ကော်မတီက အကြံပြုထားသည်။
၀န်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၃၄ ခုရှိသည့်အနက် ၀န်ကြီးဌာန ရှစ်ခုသာ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ကျပ် ၂,၃၅၆ ဘီလီယံရှိ စီမံကိန်း ၅၀၃ ခုထိရှိသည်။ ယင်းတို့ အနက် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက အများ ဆုံးဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း နိုင်ငံပိုင်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လျာထားချက်၏ ၁၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းကို သုံးစွဲမည်ဖြစ်သည်။
ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက်တွင် ပထမနေ့ ၃၀ဦး ဆွေးနွေးမှုများ မစတင်မီ နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက်နှင့် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာကိစ္စများ ထုတ်ဖော်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယကက သတိပေးခဲ့သေး သည်။
အစိုးရအဖွဲ့၏ အမျိုးသားစီမံကိန်းတွင် မတ် ၃၁ရက်တွင် ကုန်ဆုံးတော့မည့် ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်ထက် လယ် ယာ၊ သားငါး၊ စွမ်းအင်၊ ပို့ဆောင်ရေး၊ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍများ တိုးတက်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။သို့သော် သတ္တုနှင့် တွင်းထွက်၊ လျှပ်စစ်၊ ဆောက်လုပ်မှု၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ လူမှုရေး နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ငှားရမ်းခ ၊ သစ်တောနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများတွင်မူ ယခု ဘဏ္ဍာနှစ်အောက် လျော့နည်းလျာထားကြောင်း တွေ့ရသော်လည်း ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတွင် အသေးစိတ်မပါဝင်ပေ။
ပြည်နယ်၊ တိုင်းတို့တွင် အမျိုးသား စီမံကိန်း တိုးတက်မှုနှုန်းလျာထားချက်တွင် ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ စစ်ကိုင်း၊ တနင်္သာရီ၊ ပဲခူး၊ မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်၊ ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီတို့တွင် တိုးတက်မည်ဟု သုံးသပ် ထားသော်လည်း ကချင်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းတို့ကိုမူ ယခုဘဏ္ဍာနှစ်ထက် လျော့နည်းလျာထားသည်ဟု အစီရင် ခံစာက ဆိုသည်။
ယင်းအပေါ် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အချို့က ကျေနပ်မှု မရှိကြခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသား စီမံကိန်း တိုးတက်မှုနှုန်းလျာထားချက်တွင် ကချင်ပြည်နယ်ကို ယခင် ၈ ဒသမ ၄ မှ ၂ ဒသမ ၀၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ယခင် ၆ ဒသမ ၂ မှ ၅ ဒသမ ၇ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်ကို ယခင် ၆ ဒသမ ၁မှ ၅ ဒသမ ၀ ရာခိုင်နှုန်းတို့၏ လျှော့ချမျှော်မှန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရ၏ အမျိုးသားစီမံကိန်း ရည်မှန်းချက်တွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး မျှော်မှန်းချက် များ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်၊ တိုင်း၊ ပြည်နယ်များ အချိုးကျမျှတစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်၊ ဆင်းရဲချမ်း သာကွာဟမှု လျော့နည်းရန် စသဖြင့် ပါဝင်သည်။
အစိုးရအဖွဲ့က တင်ပြလာသည့် အမျိုးသားစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းတွင် လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၁၄-၂၀၁၅) ၌ အသက် ၁၅-၅၉ နှစ်အကြား အလုပ်လုပ်နိုင်မည်သူ ၃၈ ဒသမ ၇သန်း၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၆၂ ဒသမ ၂သန်း၏ ၆၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင် နှုန်းရှိမည်ဟု မျှော်မှန်းထားပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကို ၉ ဒသမ ၁ ရာ ခိုင်နှုန်းဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်မှန်းဆောင်ရွက်မည်ဟု ဆိုထားသည်။
လာမည့် ဘဏ္ဍာနှစ်၌ ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍတွင် ၆၃ ဒသမ ၆ရာခိုင်နှုန်း၊ ၀န်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် ၁၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကုန်သွယ်မှုကဏ္ဍတွင် ၁၈ ဒသမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ လယ်ယာကဏ္ဍ ၂၈ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ စက်မှုကဏ္ဍ ၃၅ ဒသမ ၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ၀န်ဆောင်မှုကဏ္ဍ ၃၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ရန်လည်း မျှော် မှန်းထားသည်။
ကျောက်မျက်ပြပွဲ လပိုင်းအလို ကျောက်စိမ်း မှောင်ခိုတင်ပို့မှု သိသာစွာမြင့်တက်
မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ပြုလုပ်ရန် တစ်လမျှအလိုတွင် မူဆယ်နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် ကျောက်စိမ်းမှောင်ခို တင်ပို့မှုများ သိသာစွာ မြင့်တက်လာကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု ရွေ့လျားမှောင်ခို တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့များက မူဆယ် ကုန်သွယ်ရေးဇုန် အနီးတွင် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ကျောက်စိမ်းမှောင်ခို ၁၇ မှု ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဖမ်းဆီးရမိမှုသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိသည့် ကျောက်စိမ်းအမှုရှစ်မှုထက် နှစ်ဆကျော် ပိုမိုများပြားလာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် ကျောက်မျက်ပြပွဲတွင် ကျောက်စိမ်းအရိုင်းတုံးများ ပြသမှုကို လျှော့ချ၍ အချောထည်များကို ပိုမိုပြသမည်ဖြစ်ရာ ကျောက်စိမ်းများကို နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ မှောင်ခိုတင်ပို့မှု ပိုများလာခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင် အသိုင်းအဝိုင်းက သုံးသပ်သည်။ ဒီဇင်ဘာလနှင့် ဇန်နဝါရီလ နှစ်လပေါင်းတွင် ကျောက်စိမ်းမှောင်ခိုမှ ကျပ်သန်း ၁၀၆၂ ကျော် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီလအတွင်း ကျောက်စိမ်းမှောင်ခိုများကို ရက်ခြား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနထံမှ သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းကမူ တရုတ်နိုင်ငံသို့ မူဆယ်နယ်စပ်မှတစ်ဆင့် တင်ပို့မည့် ကျောက်စိမ်းဘယက် အကုံး ၄၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု အဆိုပါ ဝန်ကြီးဌာန၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ အလားတူ ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့ကလည်း မူဆယ် ၁၀၅ မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန် အလွန် ယူကလစ်တောတွင် ကျောက်စိမ်း ကီလိုဂရမ် ၁၈၀၀ နီးပါး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု အဆိုပါအရာရှိက ထပ်မံ ပြောဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကမူ ကျောက်စိမ်းမှောင်ခို ၁၄၄ မှုမှ တန်ဖိုးငွေကျပ် ၁၈၃၆ သန်းကျော် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် The Voice Daily သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။""
အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်သူတွေကို အထူးအခွင့်အရေးကတ် ထုတ်ပေးမည်
အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်သူတွေကို အထူးအခွင့်အရေး ကတ်ပြားတွေ ထုတ်ပေးမယ်လို့ အခွန်ကောက်ခံမှု စိစစ်ကြပ်မတ်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့က သိရပါတယ်။ ‘နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင် အခွန်ထမ်းဆောင်တဲ့ အခွန်ထမ်းတွေကို အထူးအခွင့်အရေး လက်မှတ်တွေ၊ တံဆိပ်တွေ ထုတ်ပေးတာတွေ ရှိတယ်၊ အထူးအခွင့်အရေးကတ်တွေ ရတဲ့သူတွေကို အစိုးရဌာနတွေက ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပေးတယ်၊ ဒီမှာလဲ အထူးအခွင့်အရေး ကတ်တွေ ထုတ်ပေးဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်’ လို့ အခွန်ကောက်ခံမှု စိစစ်ကြပ်မတ်ရေး ဘုတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးသောင်းလွင်က ပြောပါတယ်။ အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်တဲ့ လူ ၅၀၀ ကို နိုင်ငံ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဆု ချီးမြှင့်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တစ်နှစ်လုံးမှာ အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်သူ၊ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းမှာ အပြီး အခွန်ထမ်းဆောင်သူတွေကို နိုင်ငံစွမ်းဆောင်ရည်ဆု ချီးမြှင့်တာပါ။ ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူတဲ့အခါမှာ နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆု ချီးမြှင့်ခံရသူတွေကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်တယ်လို့ သိရကြောင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် မော်ဒန် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ "
မြန်မာ့ပိုးထည် ဖက်ရှင်ပြပွဲ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည်
မြန်မာလူမျိုးတို့ အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထား ဝတ်ဆင်ကြသော ပိုးထည်စများဖြင့် နာမည်ကျော် ဒီဇိုင်နာများက ကွန့်မြူးဖန်တီး ချုပ်လုပ်ထားသော ဝတ်စုံများကို စုစည်းပြသမည့် ပိုးထည်ဖက်ရှင်ပြပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့ ည ၇ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းပွဲကို စီစဉ်သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးနှင့် လှူဒါန်းရေးအဖွဲ့ (I.C.C.G) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ် Pauline ခင်မောင်လွင်က ပြောကြားသည်။ ပြည်တွင်းဖြစ် ပိုးထည်စများနှင့် ချုပ်လုပ်ထားသော ဝတ်စုံများကို ပြည်ပမှ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် သံတမန်များကို ဂုဏ်ယူစွာပြသလို၍ ယခုပွဲကို စီစဉ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းပွဲတွင် မန္တလေးပိုးနှင့် အင်းလေးပိုးထည်များကို ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်းလေးပိုးထည်များ ပြသရာတွင် ဇင်းမယ် မပေါ်ခင် ခေတ်က ရရှိခဲ့သော လွန်းတစ်ချောင်းထဲဖြင့် ပုံဖော်ရက်လုပ်ထားသော အင်းလေးပိုးများနှင့် တင်ဆက်ပြသမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပိုးထည်ဖက်ရှင်ပွဲတွင် အင်းလေးဒေသမှ ဒေသခံများ၏ လွန်းတစ်ချောင်းနှင့် ရက်ကန်းရက်ခြင်းကိုလည်း ပြသရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ၄င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။ နှစ်တစ်ရာ ပိုးထည်ဖက်ရှင် ပြပွဲ၏ လက်မှတ်ဈေးနှုန်းကို လက်မှတ်တစ်စောင်လျှင် ခြောက်သောင်းဖြင့် လက်မှတ်စောင်ရေ ၃၅၀ ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ညစာစားသုံးခွင့်လည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ ပွဲမှရရှိသော ငွေများကို ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဌာန၊ လေဖြတ်ရောဂါ ကုသဆောင်နှင့် အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင် (ICU) အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူလှူဒါန်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ် Pauline ခင်မောင်လွင်က ပြောကြားသည်။ ယင်းပိုးထည်ဖက်ရှင် ပြပွဲတွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၁၀၀၊ ၇၅ နှစ်၊ ၅၀ နှင့် ၂၅ နှစ်ခန့်က ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည့် ထသွားထလာနှင့် ပွဲနေပွဲထိုင်သွား အဝတ်အစား ဒီဇိုင်းများကို မော်ဒယ်လ် ၃၆ ဦးက ဝတ်ဆင်ပြသသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပွဲကို မိတ်ကပ်ပညာရှင် ခင်စန်းဝင်းနှင့် ဒီဇိုင်နာများဖြစ်သော မိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်၊ လတ်လတ်၊ ပြည်စိုးအောင်၊ သွင်စုထွေးနှင့် ကောင်းမြတ်တို့အပြင် တေးသံရှင် နီနီခင်ဇော်တို့က ပါဝင်ကူညီမည်ဖြစ်ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးနှင့် လှူဒါန်းရေးအဖွဲ့ (I.C.C.G) ထံမှ သိရသည်ဟု ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ထုတ် The Voice Saturday သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း ဈေးကွက်တွင် ကုမ္ပဏီများ ပါဝင်ရေး ဆွေးနွေးမည်
မြန်မာနိုင်ငံ စတော့အိတ်ချိန်း ဈေးကွက်ကို လာမည့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း ဈေးကွက် အမည်ဖြင့် တည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်ရာ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်၊ ပြန်ကြားရေးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI) တွင် လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများ Daiwa Securities Group ဥက္ကဋ္ဌ Mr.Shigeharu Suzuki နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုတေသနပြုလုပ်လျက်ရှိသော Daiwa Securities Group သုတေသနဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပုဂ္ဂလိကပညာရှင်များက ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်လေးက “ဒီနေရာမှ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုက အရေးအကြီးဆုံးပဲ။ စာရင်းအင်းတွေကို ကိုယ်ပြချင်သလို ပြလို့မရဘူး။ မိသားစုကို ပြတာတစ်မျိုး၊ အစိုးရကို ပြတာတစ်မျိုး၊ ပြည်သူကို ချပြတာတစ်မျိုး လုပ်လို့မရဘူး။ စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီဖြစ်ဖို့အတွက် အနည်းဆုံးသုံးနှစ် အဲဒီစာရင်းတွေက အမှန်အကန် ဖြစ်နေရမယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တော်တော့်ကို လိုက်ရဦးမယ်” ဟု ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီဖြစ်ရေး ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ထောက်ပြသည်။ လာမည့် ၂၀၁၅ တွင် တည်ထောင်မည့် စတော့အိတ်ချိန်း ဈေးကွက်တွင် အများပိုင်ကုမ္ပဏီများသာ ပါဝင်နိုင်သည်ဖြစ်ရာ စတော့အိတ်ချိန်း ဈေးကွက်ကို မျှော်မှန်း၍ အများပိုင်ကုမ္ပဏီကြီးများ တည်ထောင်ထားကြသော်လည်း အများပိုင် ကုမ္ပဏီများ၏ အရှုံးအမြတ်၊ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ၊ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့် စီမံချက်များကို ပြည်သူများသို့ ချပြရာတွင် အားနည်းချက်များရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။ စတော့အိတ်ချိန်း ပေါ်ပေါက်လာပါက အဆိုပါ အိတ်ချိန်းတွင် ပါဝင်သည့် ကုမ္ပဏီများတွင် အစုရှယ်ယာ ဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံရာ၌ ယင်းကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်၊ ရှေ့အလားအလာ၊ အကျိုးအမြတ်တို့ကို ပြည်သူများက လေ့လာဆန်းစစ်ရန် လိုအပ်သည်ဟု သီလဝါစီမံကိန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ဆိုသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံ မေဂျီပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး နောက်ပိုင်း ၁၈၇၆ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ဂျပန်စတော့အိတ်ချိန်း ဈေးကွက် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကူအညီကို ရယူကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတော့အိတ်ချိန်း ပေါ်ပေါက်ရေး ကြိုးစားနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ထုတ် The Voice သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ""
ပညာရေးစနစ်မှာ တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား ထည့်သွင်းဖို့ NNER နှစ်ရက်ကြာ ဆွေးနွေး
ပညာရေးကဏ္ဍမှာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကအစ မြန်မာမဟုတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ဘာသာစကား အခက်အခဲရှိတာကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို နှစ်ရက်ကြာအဖြစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပနေပါတယ်။
ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက် NNER က ဦးဆောင်ပြီး ကျင်းပတဲ့ ဒီအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အစိုးရက ပညာရေးအဆင့်မြှင့်တဲ့ တူကြမ်းထဲမှာ တိုင်းရင်းသားအရေးထက် အမျိုးသားရေးဆိုပြီး တွင်တွင်သုံးနေတာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အဆင်ပြေစေချင်ရင် လူများစုက လျှော့ပေးရမှာဖြစ်ပြီး ချင်းလူမျိုးစုတွေဟာ မျိုးနွယ်စု အများကြီးရှိပေမယ့် အခြေခံစကားတူတာကြောင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသတ်မှတ်ရင် အခက်မတွေ့ဘူးလို့ ဆလိုင်း ထွန်းလှိုင်က ဆိုပါတယ်။
အင်းစိန် ခဝဲခြံ မျက်မမြင်ကျောင်းမှာ ကျင်းပနေတဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ ကယားပြည်နယ် က ဆရာမ မော်ကိုမြာက လက်ရှိအစိုးရရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေဟာ မိခင်စကား လည်း ကောင်းကောင်းမတတ်၊ ရုံးသုံးစကားလည်း ကောင်းကောင်းမတတ်ဖြစ်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
NNER အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားကဏ္ဍပါဝင်တဲ့ ရုံးသုံးဘာသာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနဲ့ ပြည်နယ်အလိုက် တိုင်းရင်းသားဘာသာ သင်ရိုးညွှန်တမ်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးကို လိုလာနေတာဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အသီးသီးက ၂ဝဝကျော် တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ အကြံပြုသူအများစုက လိုလားတယ်လို့ သုံးသပ်ထားတဲ့ အစီရင်ခံစာကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ လေ့လာသုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်း ကော်မတီက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများကို ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ အခန်း ၁ ကို မူလအတိုင်းထားရှိလိုသူက ၄၇ ဦး အကြံပြုတင်ပြထားပြီး ပြင်ဆင်လိုသူက ၂၇၁၄၈ဦး၊ ပယ်ဖျက်လိုသူက ၂၆၂ ဦးက အကြံပြုတင်ပြထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီအခန်း (၁) ထဲမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှာ တပ်မတော်က ပါဝင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးတို့ကို အစဉ်တစိုက် ဦးတည်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာ အဓိကအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဟောပြောပွဲတိုင်းမှာ ပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့ တောက်လျှောက်ပြောနေတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အခန်း ၁၂ မှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ဥပဒေမူကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်းရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းက တင်ပြရင် ပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းကို ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးရမယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲက သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုဒ်မတချို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကို ပြင်ဆင်ချင်ရင် ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က သဘောတူလက်ခံပြီးမှသာ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပပြီး ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ အားလုံးရဲ့ထက်ဝက်ကျော် ဆန္ဒမဲနဲ့သာ ပြင်ဆင်ရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါ။
အဲဒီပြဋ္ဌာန်းချက်အပေါ် တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းရယူထားတဲ့ လွှတ်တော်မှာ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်မပါရင် ပြင်မရဘူးလို့ ဥပဒေပညာရှင်တွေက ထောက်ပြနေကြပါတယ်။
ပြင်ဆင်ရန် တတိယမြောက် အများဆုံးအကြံပြုတဲ့အခန်းကတော့ အခန်း (၃) နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ ဒုတိယသမ္မတများ အခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခန်းဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပက လက်ခံနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတဖြစ်ခွင့်မရစေမယ့် ပုဒ်မ ၅၉ (စ) အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ပေမယ့် ဗြိတိသျှလူမျိုး မိုက်ကယ်အဲရစ်ကို အိမ်ထောင်ပြုခဲ့တာကြောင့် သမ္မတဖြစ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ခံထားရသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ထဲမှာ သမ္မတနဲ့ ဒုတိယသမ္မတအရည်အချင်းထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မိဘတဦးဦး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်း သို့မဟုတ် ဇနီး၊ မိမိရဲ့ တရားဝင်သားသမီး၊ သားသမီးရဲ့ ဇနီးသို့မဟုတ်ခင်ပွန်း တဦးဦးဟာ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်တာနဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိစေရလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဟာ စစ်ရေးအမြင်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်လည်းပါရှိတဲ့ ဒီအခန်းကို ပြင်ဆင်ဖို့ လိုလားသူက ၅၈၃၃ ဦးရှိပြီး မူလအတိုင်းထားလိုသူက ၈၂ ဦးပဲ ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကို အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ဖို့ ကော်မတီ တခုကိုလည်း ထပ်မံ ဖွဲ့စည်းသွားဖွယ်ရှိတယ်လို့ လွှတ်တော်အတွင်းသတင်းထွက်ပေါ်နေပြီး ဒီကော်မတီကို စောင့်ကြည့်ရမယ်လို့လည်း အမတ် အများစုက သုံးသပ်နေပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းကတည်းက အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ နဲ့ပတ်သက်လို့ ရှင်းလင်းပွဲတွေ လိုက်လံလုပ်ဆောင်ခဲ့ရာမှာ တက်ရောက်လာကြတဲ့ ပြည်သူတွေက အသစ်ရေးဆွဲရေးထက် ပြင်ဆင်ရေးကို လိုလားတယ်လို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။
လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ၁၉၉၃ ခုနှစ် အမျိုးသားညီလာခံကနေ ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခုနှစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာ အပြီးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပ အတည်ပြုခဲ့ပြီး ဆန္ဒခံယူပွဲရလဒ်နဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်။
သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာသူအား နယ်မြေရဲစခန်းက လက်မှတ် ထိုးခိုင်းနေခြင်းအပေါ် နိုင်/စစ်ကော်မတီ မေးခွန်းထုတ်
၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလက နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးစိုင်းတင်မင်းကိုအား မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဝေဘာဂီရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်နယ်ထိန်း ဦးနိုင်အောင်က တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် လာရောက်လက်မှတ်ထိုးရန် စေခိုင်းခဲ့ခြင်းကြောင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ စိစစ်ရေးကော်မတီက သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မှာ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းများအပေါ် သက်ရောက်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်။
ဦးစိုင်းတင်မင်းကိုသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလက သမ္မတ၏ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာစဉ်က ၄၀၁၊ အပိုဒ် ၁ ဖြင့် လွှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် လွတ်မြောက်လာပြီး ခြောက်လခန့်ကြာမြင့်ချိန်တွင် နယ်မြေခံရဲမှ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ရဲစခန်းသို့ လာရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးပေးပါရန် ပြောကြားခဲ့သည် ဟု The Daily Eleven ၏မေးမြန်းမှုကို ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
ထို့နောက် ဦးစိုင်းတင်မင်းကိုက NLD မြို့နယ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်အားသွားရောက်တိုင်ပင်ခဲ့ရာ ဦးကျော်ကစခန်းသို့ လိုက်လံမေးမြန်းခဲ့သည့်အတွက် နယ်ထိန်း ဦးနိုင်အောင်က တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်မှ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သို့ လျှော့ချပေးခဲ့သည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ထိုသို့သွားရောက်ရသည့်အပေါ် ဦးစိုင်းတင်မင်းကိုက "ကျွန်တော့်အခွင့်အရေးကို လာနှောင့်ယှက်နေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလဲ ထိုးရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ကမပြောပါဘူး။ ထိုးပေးပါတယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော့်တစ်ယောက်တည်းကိုမှ လာလုပ်နေတာဆိုတော့ ကျွန်တော့်အပေါ် ညစ်ပတ်သလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ ကျွန်တော့်ကို ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်း အကြောင်းကြားရမယ်။ ခရီးကိုလည်း နှစ်ပတ်ထက် ပိုမသွားရဘူးဆိုတော့လေ။ ကျွန်တော့်အတွက် တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။ နယ်ထိန်းက ကျွန်တော့်ကိုပြောတာက ကိုစိုင်းတင်မင်းကို ခရီးသွားရင် ထီသိန်း ၃၀၀ ဆုပေါက်လို့ ကျွန်တော်တို့ မသိလိုက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ပြောတော့ ကျွန်တော့်မှာ ထီတောင်ပေါက်ခွင့် မရှိသလိုဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ပုံမှန်လွတ်ရက်က ၂၀၁၆ မှ ဆိုတော့လေ ကျွန်တော်က ၂၀၁၆ အထိ လက်မှတ်ထိုးနေရမယ့်ပုံ ဖြစ်နေတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
ဦးစိုင်းတင်မင်းကိုနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား စိစစ်ရေးကော်မတီဝင် ဦးဘိုကြည်က "အဓိကကတော့ ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တောင်းဆိုနေတာကိုက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီး ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရေးပါ။ အခုလိုလွတ်လာပြီးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်နေတယ်ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ လုံးဝရှုတ်ချပါတယ်" ဟု ပြောကြားပြီး သမ္မတအနေနှင့်လည်း အမိန့်ကြေညာချက်ပါ အချက်အလက်များအား အောက်ခြေအဆင့် ၀န်ထမ်းများအထိပါ နားလည်အောင် ရှင်းလင်းသင့်သည့်အကြောင်း ဖြေဆိုခဲ့သည်။ နိုင်စစ်ကော်မတီအနေဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီး အသွင်ကူးပြောင်းနေပြီဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့အား ဆက်လက်ဖိနှိပ်နေမှုများ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ဦးဘိုကြည်က ပြောကြားသည်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအား ထောင်မှလွတ်မြောက်လာပြီး ဖြစ်သဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်လည်း တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်သည်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့မှ ဦးထွန်းကြည်ကလည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို သမ္မတက နောက်ကြောင်းပြန်သက်ရောက်မှု မရှိစေရဘူးလို့ ကတိပေးထားသော်ငြားလည်း နယ်ထိန်းကနေ သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်မှာ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းနဲ့ ခြေချုပ်ပုံစံမျိုးတွေ လုပ်လာတာဟာ တည်ဆဲဥပဒေကို ချိုးဖောက်တာဖြစ်တဲ့အပြင် သမ္မတကပေးထားတဲ့ ကတိအပေါ်မှာ နယ်မြေခံရဲအနေနဲ့ ချိုးဖောက်နေသလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတာကို အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ပါတယ်။ သမ္မတအနေနဲ့ ကိုယ်ပေးတဲ့ကတိ တည်ဖို့အတွက် ပြည်ထဲရေးကနေ ထောင်ထွက်လက်မှတ်ပေါ်မှာ နောက်ကြောင်း ပြန်သက်ရောက်မှု မရှိစေရဆိုတဲ့ မှတ်ချက်လေး ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။ လွှတ်ပေးပြီးတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလည်း လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပေးဖို့ လိုပါတယ်။ တချို့တွေကိုလည်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မပေးတာတွေ ရှိနေတာကိုလည်း ကြားနေရတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ် ဒုတိယနိုင်ငံသား၊ တတိယနိုင်ငံလို ပုံစံမျိုး ဆက်ဆံနေတာတွေအတွက် လုံးဝကန့်ကွက်တဲ့အပြင် အခုလိုဆက်ဆံတာကို ရပ်တန့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဒုရဲမှူး ဦးဇော်ဝင်းအား အကြိမ်ကြိမ် ဖုန်းဆက်မေးမြန်းသော်လည်း ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိချေ။
ရပ်ကွက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့ ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းက အစီရင်ခံစာတစောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
“ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး (သို့မဟုတ်) အခြေခံအစိုးရများ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာ ၂၀၁၃-၂၀၁၄”လို့ နာမည်ပေး ထားတဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ အခန်း ၄ ခန်းခွဲ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အခန်း ၁ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကာလ အခြေအနေများ၊ အခန်း ၂ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရွေးချယ်ပွဲနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့ အားပြိုင်မှု၊ အခန်း ၃ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား တိုင်တန်းခြင်းနဲ့ အရေးယူခြင်း၊ အခန်း ၄ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အသစ်များရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ အရည်အသွေး ဆိုပြီး ဖော်ပြထားတာပါ။
ဒီအစီရင်ခံစာကို ပြုစုထုတ်ဝေတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် လူထုဆက်ဆံရေးဌာန တာဝန်ခံ ကိုဂျင်မီက ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကို ပြည်သူ့အားနဲ့ ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကား ပါးချင်တယ်လို့ ခုလို ပြောပါတယ်။
“ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာ အခြေခံ အစိုးရဗျ။ အဲဒီ အခြေခံ အစိုးရကို ပြည်သူလူထုကို သေသေချာချာ သိအောင် လုပ်ပြီးတော့ ပြည်သူလူထု နည်းနဲ့ ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကားကို ပေးချင်တယ်ဗျ။ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြည်သူလူထုနဲ့ အနီးကပ် နေပြီးတော့မှ ဒီအခြေခံ အစိုးရ တည်ဆောက်ရေး၊ အခြေခံ အစိုးရအပေါ်မှာ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားပြုတဲ့ သူတွေ တကယ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက် ပြည်သူလူထုနဲ့ လက်တွဲပြီး ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကားပေးချင်ပါတယ်။”
အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်က ၈၈ မျိုးဆက် ရုံးခန်းမှာ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေအသင်း ကူညီမည်
မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အနေနဲ့ အိမ်ခြံမြေဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုရင် အကူအညီပေးသွားမယ်လို့ မကြာသေးမီကမှ ရွေးကောက်ပွဲတွေ လုပ်ပြီး အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ အိမ်ခြံမြေ ၀န်ဆောင်မှုအသင်း ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မို့မို့အောင်က ဒီဗွီဘီ ကို ပြောပါတယ်။
သူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ တိုင်းပြည်နယ် ပြည်နယ် ၈ ခုမှာ အသင်းခွဲတွေ ဖွဲ့စည်းထားပြီမို့ အဲဒီ နယ်တွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုတာတွေ ရှိရင်လည်း အကူအညီ ပေးသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိ အစိုးရက အခွန်အကောက် ကောက်ခံရာမှာ စံပြုတဲ့ အိမ်ခြံမြေ ဈေးနှုန်းတွေ သတ်မှတ်ရေး ကိစ္စမှာလည်း အစိုးရဘက်ကို အကူအညီ ပေးသွားမယ်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှုအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီ ၂၇ ရက်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲအသစ်တွေ ပြန်လုပ်ခဲ့ရာမှာ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်သန်း၊ ဒုဥက္ကဋ္ဌတွေအဖြစ် ဦးသန်းဦးနဲ့ ဦးသိန်းလှညို၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်မို့မို့အောင်တို့ကို ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခဲ့ ကြပါတယ်။
ဆီးရီးယားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဟာ မအောင်မြင်ပဲ ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ စေ့စပ်သူ လက်ဒါ ဘရာဟီမီက ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဘရာဟီမီ ဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံ မြူနစ်မြို့မှာ နှစ် ၅၀ မြောက် ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို တက်ရောက်ရင်း သတင်းထောက်တွေကို အခုလိုပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇန်န၀ါရီလ ၃၁ ရက်နေ့က ပြီးဆုံးသွားတဲ့ ၁ ပတ်ကြာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဟာ ပြည်တွင်းစစ်ကို အဆုံးမသတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် နောက် ၁၀ ရက်အကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံ ကျင်းပမယ့် အလားတူဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေက တက်ရောက်ဖို့ အသေအချာ မသိသေးဘူးလို့ လည်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဟုန်မ်းမြို့မှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မြို့ထံလူထုတွေဆီကို စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ ဆေးဝါးတွေ ကိုတောင် ပေးပို့ဖို့ အောင်မြင်အောင် မဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ဘရာဟီမီက ဆိုပါတယ်။ နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ် တွေဟာ ကိုယ်ရဲ့ရပ်တည်ချက်တွေကနေ တလက်မမှ အလျော့ပေးဖို့ မစဉ်းစားဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အတိုက်အခံသူပုန်တွေက လက်ရှိသမတအာဆက်မပါတဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစိုးရကိစ္စကိုပဲ ရပ်ခံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အစိုးရဘက်ကလည်း အကြမ်းဖက်တွေကို ချေမှုန်းမယ့်ကိစ္စလွဲလို့ တခြားကိစ္စတွေကို မဆွေးနွေးခဲ့ပါဘူး။
လက်ဘနွန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နာဂျပ် မီကတီကတော့ အနည်းဆုံး ဆီးရီးယားပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးအတွက် အပစ်အရပ်ရပ်စဲရေးကို လေးလေးနက်နက် လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ပထမအကြိမ် နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ မအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ထပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဆက်လုပ်ရင်းကနေ အချိန်နဲ့အမျှ တင်းမာမှုတွေ တဖြေးဖြေး ဖြေလျော့လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ သံတမန်တွေကတော့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
ယနေ့အချိန်တွင် ကိုလိုနီခေတ်ကထက် တောင်သူလယ်သမားများဘ၀ ပိုမိုနိမ့်ကျနေရကြောင်း NLD ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်သိန်းက မြေလတ်ဒေသ တောင်သူလယ်သမားညီလာခံ၌ ပြောကြား
ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက နိမ့်ကျနေခဲ့ရသည့် တောင်သူလယ်သမားများဘ၀မှာ ယနေ့အချိန်တွင် ထို့ထက်ပိုဆိုးနေရကြောင်း NLD ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်သိန်းက မကွေးမြို့ သံဃာရာမကျောင်းတိုက်၌ ဇန်န၀ါရီ ၃၁ ရက်နံနက်က ကျင်းပခဲ့သည့် မြေလတ်ဒေသ တောင်သူလယ်သမား ညီလာခံတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
မကွေးတိုင်း ၂၅ မြို့နယ်မှ တောင်သူလယ်သမားများ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အစိုးရသစ်လက်ထက် မကွေးတိုင်းအတွင်း ပထမဆုံးအနေဖြင့် တောင်သူလယ်သမား သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ယင်းပွဲတွင် တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးပိုင်ခွင့်မရှိသေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
"ဒီနေ့ထိ တောင်သူလယ်သမားတွေမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့သလို တန်းတူညီမျှမှု မရရှိသေးဘူး ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့်မရှိသေးဘူး လယ်မြေတွေ မတရားသိမ်းဆည်းခံရတယ် သိမ်းခံရတဲ့ လယ်မြေတွေကို ပြန်ရဖို့တောင်းတော့ အဖမ်းခံကြရတယ် ဒီလိုအခြေနေတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ တောင်သူလယ်သမား သမဂ္ဂတွေဖွဲ့ဖြစ်အောင်ဖွဲ့ပါ"ဟု မကွေးတိုင်း လယ်ယာမြေ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်သည့် ဦးမြင့်သိန်းက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာသည့် တောင်သူလယ်သမား အများစုကလည်း လယ်ယာမြေ မတရားသိမ်းယူခံရခြင်းများ စိုက်ပျိုးမြေမရှိတော့၍ အခြားနယ်များသို့ ထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ရသူ များပြားလာသောကြောင့် လုပ်သားရှားပါးမှု ကြုံတွေ့ရခြင်းများအား အများဆုံး တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
"တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဘ၀က ဂျာအေးသူ့အမေရိုက်ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးလိုပဲ လုံးလည်လိုက်နေတယ် တောင်သူတွေက ဂျာအေးတွေ ရိုက်နေတဲ့ သူ့အမေဆိုသူတွေက စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ ခရိုနီတွေပဲ"ဟု ယင်းညီလာခံသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ပဲခူးတိုင်း ထန်းတပင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိန်ထွန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
မကွေးမြို့ မြစ်ကွေ့ဧရာလူမှုကွန်ရက်မှ မကွေးတိုင်းအတွင်း တောင်သူလယ်သမားများအား နှစ်နှစ်ကြာ လယ်ယာမြေဥပဒေ သင်တန်းများ ပေးခဲ့အပြီး ယင်းညီလာခံအား ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါညီလာခံသို့ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(ဌာနချုပ်)၊ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက် (ရန်ကုန်)နှင့် (ပြည်ခရိုင်)တို့မှ သ၀ဏ်လွှာများ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
(မြေလတ်ဒေသ လယ်သမားညီလာခံတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်သိန်း ဟောပြောနေစဉ်)
မကွေးတိုင်း ပေါက်မြို့ရှိ မြန်မာစစ်တပ်ပိုင် လျှိုဝှက်ဓာတုလက်နက်စက်ရုံ အကြောင်း သတင်း ဆောင်းပါးရေးသားခဲ့သည့် Unity ဂျာနယ်၏ သတင်းထောက်ကို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်များ ပေါက်ကြားသည့်ဥပဒေဖြင့် အကျဉ်းချဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးနောက် ဂျာနယ်ပိုင်ရှင် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးတင့်ဆန်းကို ရန်ကုန်မြို့၌ ရဲတပ်ဖွဲ့က ထပ်မံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ဦးတင့်ဆန်းကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီး ၃နာရီခန့်အကြာ ဂျာနယ်တိုက်ရှိ နောက်ထပ် သတင်းသမား ၃ဦးကို ထပ်မံဖမ်းဆီးသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါ သတင်းမီဒီယာသမားများကို ဖမ်းဆီးအရေးယူနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ)နှင့် အစိုးရပိုင် ပြန်ကြားရေးဌာနမှ တစုံတရာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပေ။
FACEBOOK ပေါ်မှာ ရင်ဖွင့် ခံစား မိလို့ အရေးယူအပြစ်ပေးခံလိုက်ရတဲ့ လ၀က ၀န်ထမ်း ( ၁ )ဦး
၂၀၁၃ခုနှစ်...နိုဝင်ဘာလအတွင်းက လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒု.လ၀ကမှူးလုပ်သက် (၁၂)နှစ်ရှိသည်
၀န်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးကျော်သက်ဟန် အားဌာနအတွင်း အပြောင်းအေ၇ွှ့ ကိစ္စများ....၇ာထူးတိုးမြှင့်သည့်ကိစ္စများ....ဂွင်ဖန်တီးသည့်
ကိစ္စရပ်များ....လက်ဝါးကြီးအုပ်ကိုင်ပီး ချုပ်ကိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များ....လူကိုခင်လျှင် မူကိုပြင်သည်...လူကိုမုန်းလျှင် မူကိုသုံးသည်..ဆိုသည့်
ကိစ္စရပ်များ....အမြီးကျက်အမြီးစား ခေါင်းကျက်ခေါင်းစား လုပ်ရပ်များ....မျက်နှာကြီးရာဟင်းဖတ်ပါသည့်ကိစ္စရပ်များ....မူမရှိပဲလူနှင့်ကျင့်
သုံးသည့်ကစ္စိရပ်များ ထို့အပြင် ၀န်ကြီးနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါလာသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လ၀က အသွင်ပြောင်း အရာရှိကြီးများ ၏ဗိုလ်ကျ
အနိုင်ကျင့်မှုများအား သည်းမခံနိုင်တော့သည့် အတွက် facebook ပေါ်တွင် CARE TAKER အမည်ဖြင့် ခံစားချက်များပေါက်ကွဲပီးရေးသား
တင်ပြထားခြင်း အပေါ် ဦးစီးဌာနမှ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်ှးကူညီဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ၄င်း သုံးစွဲနေသည့် IP Address အားစုံစမ်းဖော်
ထုတ်ခဲ့ပီး ယင်းဝန်ထမ်းအား နေပြည်တော်သို့ခေါ်ယူပီး ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)တွင် စုံခုံဖွဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ပါသည်.....
ထိုသို့စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ၄င်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးတည်းသာ စုံခုံဖွဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပဲ ၄င်း facebook wall ပေါ်တွင် Friend အဖြင့် လက်ခံထား
ရှိသည့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ၀န်ထမ်းများနှင့် like လုပ်ထားမိသည့်ဝန်ထမ်းများအားလည်းနေပြည်တော်သို့ ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေမြန်းခဲ့ကြပီး
.....ထိုသို့ ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းခံရသည့်အထဲတွင် ဒု.ညွှန်မှူးအဆင့်ရှိသည့် အရာရှိကြီးများလည်း ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်....ထိုနောက်၎င်း
၀န်ထမ်းအား ရာထူးတိုးမြှင့် ခြင်းကို ( ၂ )နှစ်ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည့် အပြစ်ဒဏ်နှင့်အတူ စစ်ကိုင်းတိုင်း..ဖောင်းပြင် မြို့နယ်ရုံးသို့ပြောင်းရွှေ့အမိန့်
စာအားထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်....၄င်းစုံခုံဖွဲ့ စစ်ဆေးရာတွင်ပါဝင်ခဲ့သည့် ၀န်ကြီး၏တပည့်ရင်းတစ်ဦးဖြစ်သု မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ လ၀က သို့
ဒု.ညွှန်မှူး၇ာထူးဖြင့်ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါလာခဲ့သည့် ဦးယဉ်ထွေးမှ နောင်တွင် မည်သည့် ၀န်ထမ်းမဆို အင်တာနက်မှ သော်လည်းကောင်း...
သတင်းဝက်ဆိုဒ်ဌာနများမှသော်လည်းကောင်း....ဂျာနယ်များတွင်သော်လည်းကောင်း လ၀က ၀န်ကြီးဌာနအကြောင်းများအား ရေးသားဖော်
ပြ သတင်းပေးပို့သွားပါက မိမိ တို့မှ မ၇၇အောင် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပီး ၀န်ထမ်းများနှင့် သတင်းဖော်ပြပေးသည့် အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်ဂျာနယ်
များအား တရားစွဲဆိုဆောင်၇ွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်ြးုခိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်...
.၁၉-၈-၂၀၁၃ ရက်နေ့ထုတ်7 Daily new သတင်းစာတွင်ပါရှိသည့် အယ်ဒိတာထံပေးစာတွင်ပါရှိသည့် နေမျိုးကျော်စွာ ရေးသားသည့် လ၀က ၀န်ကြီးဌာန၏ မုမမှန်သည့်ကြိုးနီစနစ်များ...
ဆိုသည့် ပေးစာ....အင်တာနက် ၀က်ဆိုဒ် သတင်းဌာနများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် လ၀က ၀န်ကြီး လွှတ်တော်တွင် အရှက်တော်ကွဲခဲ့သည့်
အတွက် ကျောက်တံခါးမြို့နယ်ရုံးဝန်ထမ်းများအား အရေးယူခဲ့မှု သတင်းများလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသည်..ထိုကဲ့သို့ဝန်ထမ်းများမှအင်တာနက်မှ
နေပီးသတင်းများတင်နေခဲ့ခြင်းအပေါ် ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်..နေပြည်တော်ဝန်ကြီးဌာနတွင် လွှင့်တင်ထားသည့် ၀ိုင်ဖိုင်များအား ၀န်ထမ်းငယ်များအား လုံးဝသုံးစွဲစေခြင်းမရှိပဲ အင်တာနက် သုံးစွဲမှူအား ထိန်းသိန်းထားရှိခဲ့ပါသည်....ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှစုံစမ်းရေးကော်မရှင်
ဖွဲ့စုံစမ်းခဲ့သည့် ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ကိစ္စမှာ ပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲ နောက်ဆုံးတွင် အဖျားရှူးသွားခဲ့ရသော်လည်း လ၀ကဦးစီးဌာနမှစုံစမ်း
ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် CARE TAKER ကိစ္စမှာ စုံစမ်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ပီး ကာယကံရှင် ၀န်ထမ်းမှာ အရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းခံလိုက်ရပြီးဖြစ်ပါသည်...
ထိုဖြစ်စဉ်ပေါ် လ၀က ၀န်ထမ်းများမှ ဒေါက်တာ ဆ်ိတ်ဖွား မှာ အကောင်ကြီးမားလွန်းသည့်အတွက် ပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိသော်လည်း CARETAKER မှာ အကောင်ငယ်သည့်အတွက် ပေါ်သွားခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါသည်....ထိုကိစ္စနှင့်ပက်သက်ပီး ဦးစီးဌာန
မှ အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ ရင်ဖွင့်ခဲ့ရာ..." ၄င်းရေးသားထားခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများအားလုံးမှာ အမှန်များသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်း...၄င်းအား
စုံခုံဖွဲ့စစ်ဆေးနေစဉ်တွင်လည်း သူ့အားသွားရောက်အားပေးခဲ့ကြကြောင်း....အောက်ခြေ၀န်ထမ်းအများစုမှ သူအားဝိုင်းဝန်းထောက်ခံအားပေး
ခဲ့ကြကြောင်း....၄င်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အပေါ် ညွှန်မှူးအတော်များများနှင့် အောက်ခြေ၀န်ထမ်းများမှ ၀န်ကြီးအပေါ်အမြင်မကြည်ကြ
ကြောင်း...ယခု အင်တာနက်ခေတ်ကြီးတွင် facebook သုံးစွဲမှုမှာ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်လိုဖြစ်နေကြောင်း...ထိုကဲ့သို့ facebook သုံးစွဲနေကြ
သည့် လူတိုင်း လူတိုင်းသည် မိမိတို့ ၀မ်းသာ/၀မ်းနည်းခံစားချက်များအားမိမိ ဝေါပေါါ်တွင်အသီးသီး ရင်ဖွင့်ဖော်ထုတ် ရေးသားလာခဲ့သည်မှာ
ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတစ်ခုလိုဖြစ်နေကြောင်း....ထိုထက်ပိုဆိုးသည်မှာ သူငယ်ချင်းအဖြစ်လက်ခံထားသူများ....like လုပ်ထားမိသည့်ဝန်ထမ်း
များကိုပါ ခေါ်ယူစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့သည်မှာ မဖြစ်သင့်တော့ကြောင်း....ယခုလို ဒီမိုကရေစီ ခေတ်ကြီးသို့ ချီတက်နေကြသည့်အချိန်တွင်ထိုဖြစ်
စဉ်သည် ၀န်ထမ်းများအား ခြိမ်းခြောက်သည့် အဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း.....ထိုကြောင့် fb သုံးစွဲနေသည့် ၀န်ထမ်းများသည်
လ၀က ၀န်ကြိးဌာနနှင့်ပက်သက်သည့် သတင်းကောင်းကောင်း...သတင်းဆိုးဆိုး...တို့ကို share ဖို့မပြောနှင့် like ပင်မလုပ်ရဲတော့
ကြောင်း....နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ဦးဆောင်ပီး ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကြီးသို့ ဦးတည်သွားနေချိန်တွင် ကျွန်မ တို့ ၀န်င်္ကြးမှ ဦးဆောင်ပီးတော့ နောက်သို့
ဆုတ်ရန် ကြိုးစားနေကြကြောင်း....ဌာနအတွင်း ဒီမိုကရေစီ မပြောနှင့်...လွပ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်မရှိကြောင်း....၀န်ထမ်းများအားလည်းအကြောက်
တရားဖြင့်သာ အုပ်ချုပ်ထားကြောင်း....ထိုကဲ့သို့သာ ဆက်လက်သွားနေမည်ဆိုပါက တစ်ချိန်ချိန်တွင်အတွင်းစည်းပေါက်သွားပီး
အင်တာနက် ၀က်ဆိုဒ်သတင်းဌာနများမှ ဌာန အတွင်းရေးများထွက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း .....ထိုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ရပ်သည် မကောင်းသည့်ရှေ့ဆက်
ဘူးသီးတောင်တွင် လူတစ်ထောင်ကျော်စုရုံးပြီးမှ ယူအန်နှင့် အိုင်အန်ဂျီအိုများကို ဆန္ဒပြခွင့်မရ
(နိရဉ္စရာ- ၁ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၀၁၄)
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်မြို့တွင် ယူအန်နှင့် အိုင်အန်ဂျီအိုများ ကို ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြရန် လူပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်စုရုံးပြီးမှ အာဏာပိုင်များက ခွင့်မပြုသဖြင့် ယနေ့ ဆန္ဒပြမည့် အစီအစဉ်အား ရပ်ဆိုင်းပြီး လာမည့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်သို့ ရွှေ့လိုက်ရသည်ဟု ဆန္ဒုပြပွဲ စီစဉ်သူ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဖြစ်သူ ဦးသန်းလိူင်က နိရဉ္စရာသို့ ပြောသည်။
“ ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှာ လူပေါင်း တစ်ထောင်ကျော် ဘူးသီးတောင်မြို့ ဧစေတီကျောင်းမှာ စုရုံးခဲ့ကြပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ပြလို့ရတယ်။ ခွင့်ပြုချက်တင်စရာ မလိုဆိုတဲ့ အတွက် နားလည်မူနဲ့ ပြပါဆိုတဲ့ အတွက် ဒီကနေ့ ပြဖို့လုပ်တော့ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ မြို့နယ်ရဲမှူးကြီးက လာတားပါတယ်။ သူတို့က မေတ္တာရပ်ခံတဲ့ အတွက် ဒီနေ့ ဆန္ဒပြမယ် အစီအစဉ်ကို လာမယ့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ကို ရွှေ့လိုက်ပါတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
ဆန္ဒပြရန် လာသူများမှာ ယူအန်နှင့် အိုင်အန်ဂျီအိုများ အပေါ် အထူး မကျေနပ်ဖြစ်နေသဖြင့် ဆန္ဒပြပွဲအား ယနေ့တွင် မပြုလုပ်ကြရန် အထူး အနူးအညွှတ် တောင်းပန်ခဲ့ရသည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“ တက်ရောက်လာတဲ့ ပြည်သူတွေက မောင်တော ဒုချီးရားတန်း ပြဿနာမှာ သတင်းမှားတွေထုတ်ပြန်ပြီး ပြဿနာတွေ ကြီးထွားအောင် အကွက်ဆင် လုပ်နေတဲ့ ယူအန်နဲ့အိုင်အိုဂျီတွေကို လုံးဝ မကျေနပ်ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဆန္ဒပြဖို့ တကဲကဲ လုပ်နေတဲ့ အတွက် အာဏာပိုင်တွေနဲ့ စကားများတာတွေတောင် ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှ အတင်းဖျောင်းဖျပြီး လူစု ခွဲခဲ့ရပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ဆန္ဒပြပွဲ ပြုလုပ်ဖြစ်ပါက ယူအန်နှင့် အိုင်အန်ဂျီအိုများ သတင်းမှား ထုတ်ပြန်မူကို ရုတ်သိမ်းရန်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ ခုနှစ်ရက်အတွင်း ထွက်ခွာသွားကြရန် တောင်းဆိုသွားမည်ဟု ဦးသန်းလိူင်က ဆက်ဆိုသည်။
ယူအန်နှင့် အိုင်အန်ဂျီအိုများ အနေဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုး လုပ်ငန်းများနှင့် အတူ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို ထောက်ပံ့ ကူညီမူများပြုလုပ်နေသဖြင့် ဒေသအတွက် သူတို့ရှိနေခြင်းဖြင့် အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလားဟု မေးမြန်းရာ ဦးသန်းနိုင်က ယခုလို ပြောကြားသည်။
“ သူတို့က ဘင်္ဂလီတွေဘက်ကဘဲ တစ်ဘက်သတ် ရပ်တည်ပြီး ကူညီတာ ဖြစ်တယ်။ ဒ့ါပြင်သွေးထိုး လုံဆော်မူတွေနဲ့ မြှောက်ပင့်မူတွေ အမြဲပြုလုပ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဒေသမှာသူတို့ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး လူမျိုးနှစ်ခုအကြား သင့်မြတ်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ပြဿနာဖြစ်အောင် အမြဲဖန်တီးနေတဲ့ ယူအန်နဲ့ အိုင်အန်ဂျီအိုတွေကို ကျွန်တော်တို့ မလိုလားဘူး။ သူတို့ကို ကျွန်တော်တို့ ဒေသက ထွက်ခွာသွားဖို့ကိုသာ ကျွန်တော်တို့ လိုလားပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ယူအန်နှင့် အိုင်အန်ဂျီအိုများ၏ သတင်းအမှားများ လုပ်ကြံ ထုတ်ပြန်မူကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်လူအုပ်စုများ၏ သတ်ဖြတ်မူကြောင့် မွတ်ဆလင် အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးငယ် ၄၈ ဦး သေဆုံးခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနများက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သတင်းဖေါ်ပြခဲ့ကြသဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးများအပေါ် အထူးထိခိုက် နစ်နာမူများရှိခဲ့သည်။
ဘူးသီးတောင်မြို့ တာဝန်ရှိ ရဲအရာရှိကမူ ယနေ့ ဆန္ဒပြပွဲအားခွင့်ပြုချက်မရှိသဖြင့် တားမြစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာက ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက တားမြစ်စရာ အကြောင်း မရှိပါကြောင်း နိရဉ္စရာသို့ ပြောကြားသွားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံရုံးသည် ၎င်းတို့ အနေဖြင့် အမေရိကန်သံရုံးနှင့် ပူးပေါင်းပြီး မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာတွင် ဘင်္ဂလီ အမျိုးသမီး နှင့် ကလေးငယ်များ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့် အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းနှင့် မြန်မာ အစိုးရအား အဖြစ်မှန်ကို စစ်ဆေးဖေါ်ထုတ်ရန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာ သတင်းအမှား ဖြစ်သဖြင့် သူတို့၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ရုတ်သိမ်းကြောင်း ယမန်နေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ရခိုင်ဒေသ အခြေအနေမှာ စိုးရိမ်စရာကောင်းနေသဖြင့် မြန်မာ အစိုးရကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းရန် တောင်းဆိုထားသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နယ်စပ် အနီး မြန်မာဘက်က တည်ဆောက်ထားတဲ့ စစ်စခန်း (၄) ခုကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့က ကန့်ကွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ရုတ်သိမ်းသွားပြီ ဖြစ်တယ်လို့ ဘင်္ဂလာအာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
အမှတ် ၃၁ ဘီဂျီဘီ တပ်ရင်းမှူး Lt Col Md Shafiqur Rahman က မြန်မာဘက်က စစ်စခန်းတွေ ရုတ်သိမ်းသွားတာကို Dhaka Tribune သတင်းစာကို မနေ့က အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ အခု မြန်မာဘက်က စစ်စခန်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ရုတ်သိမ်းသွားခဲ့တယ်။ ခုလို ရုတ်သိမ်းသွားတဲ့ အတွက် နယ်စပ်အခြေအနေက ပုံမှန်အတိုင်းနဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ရှိပါတယ်” ဟုသူက အတည်ပြု ပြောကြားပါတယ်။
မြန်မာ စစ်တပ်ဟာ နိုင်ငံတကာ နယ်စပ်မျဉ်းကြောင်း (စီရို)လိုင်းကနေ ကိုက် ၃၀၀ အကွာမှာ စစ်စခန်း (၄) ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့က စွပ်စွဲခဲ့ပြီး ဒါတွေကို ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
လက်ပံတောင်း ကြေနီးမိုင်းခွဲမှုတွေကြောင့် အနီးနား ကျေးရွာသိမ်ကျောင်း အက်ကွဲ (video ပါသည်)
31.01.2014 - လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်က မိုင်းခွဲမှုတွေကြောင့် အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကျောက်ဖြူတိုင်ကျေးရွာက စေတီတော် သိမ်ကျောင်းနဲ့ ဘုန်တော်ကြီး ကျောင်းတိုက်တွေ အက်ကွဲပျက်စီးမှု ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒေါ်ခင်မင်းဇော် သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ရိုက်ကူး အောင်ကျော် ဉာဏ်ကြီး
ဝိုင်းမော် ရွှေကျင် လုပ်ငန်းများကြောင့် အူဂန်းဘွမ် ရေဝေရေလဲဒေသ ပျက်စီးမည်ကို စိုးရိမ်
မြစ်ကြီးနား၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀
ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ် နောင်းချိန်းကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ အူဂန်းဘွမ် ရေဝေရေလဲဒေသ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ ရွှေတူးဖော် ချက်လုပ်နေခြင်းကြောင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးမည်ကို စိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
နောင်းချိန်းကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်း ပုန်ဒုန်းကွင်းနှင့် ထွယ်ဆန်ယန် ကွင်းများရှိ ကုန်းမြင့်များအား လိုဏ်ခေါင်းတူး၍ အတွင်းမှ ရွှေပါသည့် ကျောက်သားကို ထုတ်ယူကာ ကြိတ်ပြီးနောက် ရရှိလာသော မြေစာမှုန့်များကို ရွှေ ချက်ကန်များအတွင်း ဓာတုပစ္စည်းများ ထည့်သွင်းကာ ရွှေချက်ကြောင်း၊ ထွက်ရှိလာသည့် စွန့်ပစ် ရေများသည် နောင်းချိန်းကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ မိုင်ဆော်ချောင်းအတွင်း စီးဝင်နေခြင်းကြောင့် ဒေသခံများက စိုးရိမ်နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နောင်းချိန်းရွာသား ဦးဂွမ်ဆိုင်းက ပြောဆိုသည်။
“တစ်နယ်လုံးက လယ်သမားတွေနဲ့ ကျွဲ၊ နွားတွေက ဒီရေဝေရေလဲကို အားကိုးနေရတာ။ ဆာရင်နိုက် ပျော်ဝင်နေတဲ့ ရေတွေက လယ်ကွင်းတွေထဲကို တိုက်ရိုက်ရောက်မှာ။ မနှစ်ကလည်း တစ်နယ်လုံးက ကျွဲ၊ နွားအကောင်ရေ ၂၀၀ လောက် သေသွားတယ်” ဟု ဦးဂွမ်ဆိုင်းက ဆိုသည်။
ဓာတုအဆိပ် ပျော်ဝင်နေသည့် ချောင်းရေကြောင့် စပါးခင်းများ အငွေ့ရိုက်ကာ ပျက်စီးခဲ့ရသည့်အပြင် အထွက်နှုန်း လျော့နည်းမှုများလည်း ရှိကြောင်း စပါးခင်းများ ပျက်စီးခဲ့ရသူ ဦးလွှမ်းဇောင်းက ပြောကြားသည်။
ရွှေချက်ကန်အနီးသို့ ကျန်းမာရေး မကောင်းသူများနှင့် နှလုံး အားနည်း ရောဂါရှိနေသူများကိုမူ လာရောက်ရန် ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိကြောင်း ရွှေချက်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
“ရွှေချက်တဲ့ နေရာမှာ ဆေးအဖြစ် ဆာရင်နိုက်၊ ကော့စတစ်၊ အမိုးနီးယား ဒီသုံးမျိုးကို သုံးပြီး ရေနဲ့ ချက်တယ်။ ထွက်လာတဲ့ ရေကို ကာဗွန်နဲ့ ရွှေရအောင် ပြန်ဖမ်းတယ်” ဟု ထွယ်ဆန်ယန် ကွင်းတွင် ရွှေတူးဖော်နေသည့် အသက် ၃၀ ကျော် အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အူဂန်းဘွမ် ရေဝေရေလဲ ဒေသကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှ စတင်ကာ အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောဧရိယာအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ထိန်းသိမ်းလျက် ရှိကြောင်း နောင်းချိန်းကျေးရွာ အစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တော ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခေါင်နန်းထံမှ သိရသည်။
ဖွင့်နိုင်၊ သိမ်းနိုင်တဲ့ အမိုးရှင်တစ်ခု ပါဝင်မယ့် ဘာနေဗျူးကွင်း ပုံစံသစ်ကို ရီးယဲမက်ဒရစ်ကြေငြာ၊ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးကွင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲမည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း သမီးရဲ့ သရက်ခြံအတွက် ဒေသခံလယ်မြေတွေ သိမ်းယူ (ရုပ်သံ သတင်း)
31.01.2014 - နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို.နယ် ဇလောင်းကျေးရွာအုပ်စုမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်းသန်းရွှေရဲ့ သမီး ဒေါ်သန္တာရွှေရဲ့ ဧက၁၀၀ စီမံကိန်းသရက်ခြံအတွက် ဒေသခံတွေပိုင်တဲ့လယ်ယာမြေတွေသိမ်းယူခံနေရ­ပါတယ်။ ဦးကျော်သက်မင်း သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် နောက်ဆုံး ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ ချီတက်ပွဲ
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် နောက်ဆုံး အစိုးရဆန့်ကျင် ချီတက်ပွဲကို ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ဆူတစ်သောင်ဆူဘန်က ခေါင်းဆောင်ပြီး ဘန်ကောက်မြို့ တရုတ်တန်းမှာ ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။
၀န်ကြီးချုပ်ယင်လပ်ရဲ့ ဖွေ့ထိုင်းပါတီ အာဏာပြန်မရအောင် မဲပေးမှုတွေကို နှောက်ယှက်တားဆီး မယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေရှိပေမယ့်လည်း ယင်လပ်အစိုးရကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ဆူတစ်သောင်ဆူဘန်က ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ ဘန်ကောက်မြို့လမ်းတွေကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ပိတ်ဆို့ ဆန္ဒပြဖို့ ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် မဲသွားပေးတဲ့သူတွေကိုတော့ အနှောင့်အယှက်မပေးဖို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် ဆူတစ်က မည်သူမဆို ဘယ်အရောင်ကိုမဆို ၀တ်ဆင်နိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုပြီး ၀န်ကြီးချုပ်ယင်လပ်တို့ အနီရောင် အင်္ကျီတွေကို ၀တ်ဆင်ပြီး ချီတက်ခဲ့ကြတဲ့ စနေနေ့ချီတက်ပွဲကတော့ ထူးခြားနေခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်မှာ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘန်ကောက်မြို့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ လူ ၁၀ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ၅၇၇ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့ စနစ်တကျ မှတ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တဲ့ အေရာဝမ်ဆေးကုသရေးစင်တာက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Unity ဂျာနယ် သတင်းထောက်ကို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက် ပေါက်ကြားမှုဖြင့် အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီး
ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ဝေသော Unity ဂျာနယ် အတွဲ ၃ အမှတ် ၄ (ဓာတ်ပုံ- ဧရာဝတီ)
ပေါက်မြို့နယ်ရှိ လက်နက်စက်ရုံသတင်းကို ရေးသားခဲ့သော Unity အပတ်စဉ် ဂျာနယ်၏ နယ်ခံသတင်းထောက်ကို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှု ပုဒ်မဖြင့် အရေးယူရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း ပေါက်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှူး ဦးငွေထွန်းက ဧရာဝတီကို အတည်ပြုကြားသည်။
“ဟုတ်ပါတယ်။ သူ့ကို နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်ပေါက်ကြားမှု ပုဒ်မ ၃/ ၁ ( က ) ၉ နဲ့ အမှုဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ အခု သူ့ကို ကျနော်တို့ စခန်းကနေ ပခုက္ကူမြို့က သတင်းတပ်ဖွဲ့ကို လွှဲလိုက်ပါပြီ။ ကျနော်တို့ စခန်းမှာ မရှိတော့ဘူး။ သူ့ကို ပခုက္ကူမှာ စစ်ဆေးဦးမှာပါ။ ထောင်ကို တန်းပို့မယ်တော့ မထင်ပါဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ထို့အပြင် Unity ဂျာနယ်၏ CEO ဖြစ်သူ ဦးတင့်ဆန်းကိုလည်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဂျာနယ်တိုက်မှ ရဲ သတင်းတပ်ဖွဲ့မှ စစ်ဆေးရန် လာရောက်ခေါ်သွားကြောင်း၊ အဆိုပါသတင်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးသားခဲ့သော Unity ဂျာနယ်မှ အကြီးတန်း သတင်းထောက်များဖြစ်သူ ကိုရာဇာဦးနှင့် ကိုပိုင်သက်ကျော်တို့မှာလည်း ဂျာနယ်မှ ဆက်သွယ်၍ မရ သေးကြောင်း Unity ဂျာနယ်၏ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ဦးမင်းထက်မြတ်က ပြောသည်။
ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက် နေ့စွဲဖြင့်ထုတ်ဝေသော Unity ဂျာနယ် အတွဲ ၃ အမှတ် ၄ ပါ မျက်နှာဖုံးသတင်းမှာ အဆိုပါစက်ရုံအတွင်း ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြသော ဒေသခံများ၏ ပြောဆိုမှုကို အဓိကထား အခြေခံရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး နယ်ခံများက ဓါတု လက်နက်စက်ရုံ ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယူဆပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“အခု CEO ကို အထက်ကအရာရှိက တွေ့ချင်တယ်ဆိုပြီး ခေါ်သွားတယ်။ သူဘ ယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရဦးမယ်။ ကျနော်တို့ဂျာနယ်ရဲ့ ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ ဘာ ဆက်လုပ်မလဲဆိုတာ ပြောနိုင်မယ်” ဟု ဦးမင်းထက်မြတ်က ဧရာဝတီသို့ ဆိုသည်။
Unity ဂျာနယ် အတွဲ ၃၊ အမှတ် ၄ ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော “ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း၊ တရုတ်ပညာရှင်နှင့် လက်ရှိ ကာ/ ချုပ်တို့၏ ပေါက်မြို့နယ်မှ လျှို့ဝှက် ဓါတုလက်နက်စက်ရုံ” ဆိုသည့် သတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ကာ အတွင်းပိုင်းအထိ ရောက်အောင်သွားကာ လေ့လာခဲ့ပြီး တိကျခိုင်လုံသော သက်သေ အထောက်အထားများပါ လက်ဝယ် ရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း Unity ဂျာနယ်၏ CEO ဦးတင့်ဆန်းက ရဲများလာရောက်မခေါ်မီ ဧရာဝတီ၏ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မှုကို ဖြေကြားခဲ့သည်။
“ကျနော်တို့မှာ သက်သေ အထောက်အထားတွေ တိတိကျကျ ရှိတယ်။ ဒီသတင်းက သတင်းမှားလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့အချက်အလက်တွေကို ကျနော်ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံတော် လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ပေါက်ကြားသွားမှာစိုးလို့ ထည့်မရေးခဲ့ပါဘူး။ ကျနော့်ဘက်ကတော့ ရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပဲ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဂျာနယ်၏ ထုတ်ဝေသူဖြစ်သည့် ဒေါ်လတ်လတ်ကိုလည်း သတင်းရဲတပ်ဖွဲ့များမှ သွားရောက်တွေ့ဆုံကာ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ ရိုက်ယူသွားခဲ့သေးကြောင်း ထုတ်ဝေသူနှင့် တယ်လီဖုန်း အဆက်အသွယ်ရခဲ့သည်ဟုလည်း ဦးတင့်ဆန်းက ပြောသည်။
သတင်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသော စက်ရုံကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး စက်ရုံအတွက် မြေ ၃၃၃၈၇ ဧက သိမ်းယူခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိအ ချိန်တွင် စက်ရုံသည် တည်ဆောက်မှု ပြီးစီးလုနီးပါးသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ပင်မ အဆောက်အဦးနှင့် ကျန်အဆောက်အဦးများကို တောင်တလုံးခြားပြီး သံမဏိ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း ပေ ၁ ထောင်ကျော် ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားကြောင်း၊ စက်ရုံအတွင်းသို့ ပေါင်းအိုအဖြူကြီးများ၊ ဘိလပ်မြေများကို ၂၂ ဘီးကားဖြင့် မကြာခဏ လာပို့သည်ကိုတွေ့ရကြောင်း၊ ဂန့်ဂေါခရိုင်ရှိ အမှတ် ၂၃ က-ပ-စ စက်ရုံနှင့် ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်ရှိ အမှတ် ၂၂ က-ပ-စ စက်ရုံတို့နှင့်လည်း ကားလမ်းအဆက်အသွယ်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာပြည်မှာက နေရာတိုင်းမှာ နွားနို့မရှိပေမယ့် လမ်းတိုင်းလိုလိုမှာ အရက်ဆိုင်ရှိနေတာကတော့ တကယ့် လက်တွေ့ပါ . . .
မကြာသေးခင်က သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်က အရက်အစား နို့သောက်ဖို့အတွက် တိုက်တွန်းလို့ဆိုပြီး လူမှု ကွန်ရက် တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်ပေါ်မှာ ပွက်လောကို ညံကုန်ပါလေကော။ သမ္မတကြီးက အရက်အစား နွားနို့သောက်ဖို့ တိုက်တွန်း လေတော့ နွားနို့ကို တကယ်သုံးစွဲပါတယ် ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်နီးချင်း အိန်္ဒိယ နိုင်ငံကို သွားသတိရမိတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ နွားနို့ဟာ ဒေသခံ အိန်္ဒိယနွယ်ဖွားတွေ အတွက်တင် မကဘူး မြန်မာ ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပါ အဓိက အာဟာရဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုပါ။
အိန်္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့မှာ နံနက် အိပ်ရာနိုးရင် ထမင်းကြမ်းနဲ့ ပဲပြုတ်ဖြစ် ဖြစ်၊ အကြော် အလှော်လေး နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် နေ့တစ်နေ့ စဖွင့်ချင်တဲ့၊ စဖွင့်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသား တွေအတွက် အခက်အခဲဆုံး ဒုက္ခက နံနက်စာ ရှာရ ခက်တာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ့်ရဲ့ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ အကြော်ေ လး ကြော် ရောင်း၊ စမူဆာလေးကြော်ရောင်းမှ အဆင်ပြေတာပါ။ နောက်တစ်ခုက မနက် အိပ် ရာထ မျက် လုံးနှစ်လုံး ပွင့်တာနဲ့ ဗိုက်ဆာ တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတတ်တော့ မနက်ဆို ရင် ၁၀ နာရီထိုးမှ ဆိုင်ဖွင့်လေ့ရှိတဲ့ အိန်္ဒိယ သားတွေကြောင့် အခက်တွေ့ရပြန်ကော။
ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားပီပီ စားစရာ မရှိရင်တောင် လက်ဖက်ရည်လေးသောက် လိုက်ရ မှ၊ ကော်ဖီလေး သောက်လိုက်ရမှ အာသာပြေတဲ့သူဆိုတော့ အဆင်ပြေတာ တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ အဲဒါက မနက်စောစော ဆိုရင် ကားလေးတစ်စီးနဲ့ ရပ်ကွက်ပတ်ပြီး ဆိုင်တွေကို လာလာပို့တဲ့ နွားနို့ပါ။ …
လီတာဝက်ပါတဲ့ နွားနို့တစ်ထုပ်ကို အိန်္ဒိယသုံးငွေ ၁၅ ရူပီးပဲ ရှိပါတယ်။ ငွေ လဲနှုန်း ၁၅ ကျပ်နဲ့တွက်မယ် ဆိုရင်တောင် ၂၂၅ ကျပ်ပဲ ကျပါတယ်။ ဒါတောင် ဈေးတက်သွားလို့ပါ။ အရင်ကဆိုရင် ၁၃ ရူပီးပဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင် ၂၀၀ ကျပ်တောင် မပြည့်ပါဘူး။ အမျိုးအစားကလည်း တော်တော်များပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အထုပ်နဲ့ မ၀ယ်ချင်သူတွေအတွက်လည်း အကြွေစေ့ထည့်ရုံနဲ့ အလိုအလျောက် နွားနို့ထွက်တဲ့ စက်မျိုးတွေကို လည်း ရပ်ကွက်ကြီးတွေတိုင်းမှာ ထားထားတဲ့အတွက် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် နွားနို့ကို ရနိုင်ပါ တယ်။
ဒါတင်ပဲလား မဟုတ်ပါဘူး။ နွားနို့ သောက်လို့ အဆီတက်မှာ ကြောက်တဲ့သူ တွေ အတွက်လည်း အဆီလျှော့ ထားပြီးဖြစ်တဲ့ နွားနို့ Toned-Milk အမျိုးအစားလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီဟာဆိုရင် ပိုလို့တောင် ဈေးပေါပြီး မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၅၀ လောက်နဲ့ ၀ယ်လို့ ရပါတယ်။
၂၂၅ ကျပ်တန် နွားနို့ကို TaTa Tea လို့ခေါ်တဲ့ လက်ဖက်ရည်အချိုခြောက် ငါး ရူပီးတန် (မြန်မာငွေ ၇၅ ကျပ်)၊ သကြား အနည်းငယ်နဲ့ ဖျော်မယ်ဆိုရင် မိသားစုသုံး ယောက်ရှိတဲ့ အိမ်တစ်ခုအတွက်တော့ ဖူလုံပါတယ်။ အိန်္ဒိယမှာတော့ လက်ဖက်ရည်ကို သကြားမသုံးဘဲ နွားနို့နဲ့ ဖျော်၊ ပြီးရင် ချင်းပြားလေးရိုက်ထည့်ပြီး ရောင်း တာတွေရှိသလို အဲဒီတစ်ခွက်ကို မြန်မာ ငွေနဲ့ဆို ၇၅ ကျပ်ပဲ ကျပါတယ်။ တချို့များ ဆိုရင် ကွမ်းယာထဲ ထည့်စားတဲ့ ဖာလာစေ့ ကိုတောင်မှ လက်ဖက်ရည်ထဲ ထည့်သောက် တာမျိုးထိ ရှိပါတယ်။
နွားနို့ဟာ အသက် နှစ်နှစ်ကနေ ငါးနှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တွေအတွက် တစ်နေ့ကို လီတာဝက် ဒါမှမဟုတ် ရှစ်အောင်စပါတဲ့ နွားနို့ နှစ်ခွက်ကို နေ့တိုင်းသောက်သုံး သင့်တယ်လို့ နော်ဝေနိုင်ငံ တိုရန်တိုမြို့ စိန့်မိုက်ကယ် ဆေးရုံက သုတေသနပညာ ရှင် ဒေါက်တာ ဂျိုနသန် မာဂူရီက ဆိုထားပါတယ်။ ကလေးငယ်ပေါင်း ၁၃၀၀ ကျော်ကို စစ်တမ်းလုပ်ပြီး ပြုစုထားတဲ့ သူ့ရဲ့ စစ်တမ်းထဲမှာဆိုရင် နွားနို့ လုံလုံ လောက်လောက် မသောက် နိုင်တဲ့ ကလေး ငယ်ဟာ ဗီတာမင်ဒီ ချို့တဲ့ပြီး ပုံမှန် သောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အရိုးတွေကို သန်မာစေတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်များလားတော့ မသိ။ အိန်္ဒိယပြည်က ကလေးတွေကို ကြည့် လိုက်ရင် လျှပ်စီးလက်သလို ဆော့လိုက်ပုံ များ မျောက်ရှုံးတယ်ဆိုတာ လက်ခံမိတယ်။ အရပ်စကားနဲ့ပြောရင် အပေအတေလည်း ခံပါ့။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကို နို့ဆီနဲ့ ဖျော်မယ်ဆိုရင် ဆိုင်သောက်တစ်ခွက်အတွက် ၂၅၀ ကျပ်၊ ချက်နို့ဆီနဲ့ ဖျော်မယ်ဆိုရင် ၁၅၀ ကျပ်ပါ။ နွားနို့နဲ့ ဖျော်တဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆိုတာ တော်တော် ရှားပါတယ်။ ရှားတယ်ဆိုတာကလည်း နွားနို့ဝယ်ဖို့ဆိုရင် အရည်အသွေး မပြည့်မီတာ၊ ရေရောတာတွေက မကြာခဏ ဆိုလလို ကြားနေရတဲ့ ပြဿနာပါ။ နောက်တစ်ခုက လက်ဖက်ရည် ဆိုင် တွေမှာပါ။ လက်ဖက်ရည် နဲ့ နွားနို့ကို တွဲရောင်း၊ မလိုင်ဖတ်ပါတယ်ဆိုပြီး ထည့် ပေး၊ အဲဒီ မလိုင်ဖတ်တွေက တစ်ရှူးစတွေ ပါဆိုပြီး ဝေဖန်မှုတွေကလည်း ရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး နွားနို့ဝယ်ဖို့အတွက် နေရာတိုင်းမှာ ဆိုင်တွေ မရှိပါဘူး။ ထို့အတူ နွားနို့အတွက် အဓိက အကျဆုံးဖြစ်တဲ့ နွားတွေဟာလည်း နယ်စပ်ထွက်ပေါက် တွေထက်တစ်ဆင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေကို ခိုးထုတ်ရောင်း နေတာတွေလည်း သတင်း တွေလည်း ကြားနေပါတယ်။
အခုတော့ သမ္မတကြီးက ပြောလာပြီ။ အရက်အစား နွားနို့သောက်ဖို့ပါ။ အရက် သောက်တဲ့သူဆိုတော့ လူလတ် ပိုင်းနဲ့ လူကြီးပိုင်းကို ပြောချင်တာလို့တော့ ထင်မိ ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက နေရာတိုင်းမှာ နွားနို့ မရှိပေမယ့် လမ်းတိုင်း လိုလိုမှာ အရက်ဆိုင်ရှိနေတာကတော့ တကယ့် လက်တွေ့ပါ။ သမ္မတကြီးက စေတနာနဲ့ အကြံပြု ပြောကြားတဲ့ နွားနို့သောက်ဖို့ ဆိုတာ အရက်သောက်ဖို့ထက် ပိုခက်နေတာက မြန်မာပြည်ရဲ့ အနေအထားပါ။
ကျွန်တော့် တစ်ဦးတည်းအမြင်နဲ့ပဲ သမ္မတကြီးရဲ့ နွားနို့သောက်ဖို့ အကြံပြု စကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်း ထုတ်လိုက်ပါရစေ။
မြန်မာပြည်မှာ အိန်္ဒိယလိုမျိုး နွားနို့ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုလိုမျိုး လိုအပ်ချက်တွေကို ပြည့်မီအောင် ထုတ်လုပ်နိုင် နေပြီလား၊ နေရာတိုင်းမှာ ကောဝယ်လို့ ရနေပြီလား၊ လူတွေအနေနဲ့ နွားနို့ကို သောက်သင့် ကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိပညာ ဗဟုသုတရရှိအောင် လုပ်ကိုင်ပြီးပြီလား၊ လမ်းတကာအသီးသီးမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ အရက် ဆိုင်တွေကို ပိတ်သိမ်းဖို့ စီစဉ်ပြီးပြီလား၊ အရက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အခွန်မြှင့်တင်ပြီး ရောင်းလိုအား ကျလာအောင် အမျိုးသားအဆင့် စီမံကိန်းတွေ ရေးဆွဲပြီးပြီလား၊ အရက်သောက်သုံး ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တားဆီးဖို့အတွက် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတပေးရန် စီမံကိန်းများ ချထားပြီလား….၊ လား ပေါင်းများစွာ ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒီတော့ သမ္မတကြီးရဲ့ အရက်အစား နွားနို့သောက်ပါဆိုသည့် စကားရပ်တစ်ရပ် အတွက် အကောင် အထည် ဖော်ရန် အချက်များစွာ လိုတယ်ဆိုတာကိုတော့ဖြင့် သတိ ချပ်စေလိုပါတယ်။ အရက်အစား နွားနို့ သောက်ခြင်း သည် ကောင်းသည့်အတွက် ထိုကောင်းသည့်အချက်ကို ဖြစ်ထွန်းစေရန်လည်း လိုအပ်နေပါကြောင်း မီးမောင်း ထိုး ပြလိုရင်းပါ။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ မိန့်ခွန်းမှာ ဘာတွေ ထူးသလဲ
လစဉ် ရေဒီယိုကတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားလေ့ ရှိတဲ့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှာ ပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီလ အတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေကို ပြောဆို ထားပါ တယ်။
ဒီအထဲမှာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဋ္ဌာနချုပ် လောခီးလာမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေရဲ့ ညီလာခံကျင်းပခဲ့ပြီး သဘောတူညီချက်တွေ ရခဲ့တာ၊ ဒီကတဆင့် ဖားအံ ဆွေးနွေးပွဲကျင်း ပမယ့်အကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ အဓိက ကျတဲ့ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ကိစ္စလက်မှတ်ထိုးနိုင်မယ့် ကိစ္စလည်း ပါဝင်သလို နှစ်ပေါင်းများစွာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ခွင့်ရပြီး အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၂ ထောင် ကိုလည်း စတင် ထောက် ပံ့ ချေးယူခွင့် ရတာကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။
ဒီအပြင် ဦးသိန်းစိန်က အမျိုးသား ကျန်းမာရေး ကိစ္စ၊ ပညာရေး ကိစ္စတွေလည်း ထည့်သွင်းပြောဆိုသွား ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ ပညာသင်ယူနိုင်ဖို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ပညာရေးသင်ဆု ကိုပေးဖို့ အဖွဲ့ကိုလည်း ထူထောင် ထားပြီဖြစ်တယ်လို့ ထည့်သွင်းပြောဆိုပါတယ်။
ဒီအပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဆိုးဆုံးအခြေအနေတခုဖြစ်တဲ့ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုကိစ္စတွေလည်း ထည့်သွင်း
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံကတော့...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြောကြားသည့် ရေဒီယိုမိန့်ခွန်း(၁.၂.၂၀၁၄)
မိဘပြည်သူများခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေများကို မိဘပြည်သူများထံ ရေဒီယို ကနေ တစ်ဆင့် အသိပေး ပြောကြား နေကျဖြစ်တဲ့အတိုင်း ဇန်နဝါရီလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေ များ
နှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကို မိဘပြည်သူများထံ ယခုကဲ့သို့ ပုံမှန်တင်ပြရခြင်းဖြစ် ပါတယ်။
လက်ရှိကျွန်တော်တို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှု ကိစ္စရပ်များးမှာ အခက်အခဲများ၊ စိန်ခေါ်မှုများ၊ အကြပ်အတည်းများ ရှိနေ
ခြင်းဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲစ နိုင်ငံတိုင်းမှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ အရှိတရားများပင် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခက်အခဲတွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ ရလဒ်များ ထွက်ပေါ်ခြင်း မရှိသေးတဲ့ ကိစ္စရပ်များအတွက် စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရည်မှန်းထားပြီး ခိုင်မာတဲ့သန္နိဌာန်နဲ့ လုပ်
ဆောင်နေခြင်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အသိပေး ပြောကြားလိုပါတယ်။
သမိုင်းကြောင်းနဲ့ချီတဲ့ လိုအပ်ချက် များရှိခဲ့တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို မှန်ကန်တဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ လုပ်ဆောင်တဲ့အခါ ဖြည့်ဆည်းရမယ့်ကွပ်လပ်များ၊ လိုအပ်ချက်များကို ရုတ်ခြင်းအဖြေထုတ် အပြောလွယ် သလောက် လက်တွေ့မှာ လုပ်ရတာ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဆောင်ရွက်ရမယ့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဟာ ရေဆန်ကူးရ သကဲ့သို့ ခက်ခဲတဲ့လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင် နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာ စိန်ခေါ်မှု ကြီး မားသော်လည်း ကျွန်တော်တို့အစိုးရ တာဝန်ယူချိန်မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ခိုင်မာတဲ့သန္နိဌာန်နဲ့ ဆောင် ရွက် ခဲ့ တဲ့အတွက် လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း အမျိုးစုံသော အခက်အခဲ၊ အကြပ်အတည်းများနဲ့ စိန်ခေါ်မှု များကို အစိုးရ၊ လွှတ်တော်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ၊ အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများနဲ့ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံး ကိုယ်စီကျရာ အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပူးပေါင်း
ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက် ဒီကနေ့မှာ အာမခံချက်ရှိတဲ့ တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ရေးထိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်နဲ့ နိုင်ငံရေး
ဆွေးနွေးမှု နည်းလမ်းများနဲ့ ဖြေရှင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ အရုဏ်ဦးကို ရောက်ရှိဖို့ အဆင့်ဆင့် တစ်လှမ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တလောရရှိထားတဲ့ အောင်မြင်မှုကတော့ ကရင်ပြည်နယ်၊ လောခီလာဒေသမှာ KNU က ဦးစီးကျင်း ပတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲများ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခြင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဆွေးနွေးပွဲများမှ ရရှိလာတဲ့ ရလဒ်ကောင်းများကို အခြေခံပြီး လိုအပ်မယ့် အဆင့်ဆင့်ညှိနှိုင်း မှုတွေ
ပြုလုပ်ပြီး မကြာမီကာလအတွင်း ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘာအံမြို့မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပပြီး တစ်ပြည်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စရြေးဆိုင်ရာ လက်မှတ်ရေးထိုးရေးအတွက် ရက်သတ် မှတ်ခြင်းနဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုမှတစ်ဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ကို အခြေပြုတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်
ရေး အတွက် လိုအပ်မည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာ မူဘောင်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ စတင်ခြင်းဆိုတဲ့ အဆင့်များကို တက်လှမ်းနိုင်ငံတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဤကိစ္စရပ်များသည်ပင်လျှင် မိမိတို့အားလုံး မဆုတ်မနစ်သော ဇွဲလုံလဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး ရလဒ် များ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို အခြေပြုတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး တည်ဆောက်ရေးနဲ့ အပြိုင် မြန်မာ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လူမှုရေးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများအတွက် အဓိကကျတဲ့ အမျိုးသား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက် အဓိကကျတဲ့ အမျိုးသား ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကိုလည်း အခြေခံမှစ၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလိုစတင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ခြင်းဟာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေက ရရှိလာတဲ့ ပွင့်လင်း လွတ်လပ် မှုတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလအတွင်း ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ ကိစ္စ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြတ်တောက်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ ပြန်လည်ပြီး ပူးပေါင်း ဆောင် ရွက်နိုင်မှုနဲ့ အကူအညီများရရှိခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ ပူးပေါင်း ပါဝင်မှုတွေကို အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်စေဖို့ အားဖြည့်တဲ့ အနေနဲ့ ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဖိုရမ်ကိုလည်း ယခုလ အတွင်းမှာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အခြေခံကစပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး နိုင်ငံသားတိုင်း လက်လှမ်းမီနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တစ်ရပ်ကို ပညာရှင် များနဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီး စီမံဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
ဒီစီမံချက်ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် အုပ်စုရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ (IDA)တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ရေတို ရေရှည်စီမံကိန်းများ ချမှတ်ဆောင်ရွက် သွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Universal Health Coverage လို့ခေါ်ဆိုတဲ့ ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေး နိုင်ငံသားတိုင်း လက်လှမ်းမီနိုင်မယ့် ကျန်းမာရေးစနစ်ကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် အဓိကအကျဆုံး ဖြစ်တဲ့ကိစ္စရပ် ကတော့ လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများကဲ့သို့ပင် မိမိတို့ ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စနစ်တစ်ရပ် ဖြစ်ရန် မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုများနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလို အမျိုးသားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စနစ်တစ်ရပ်ကို ပိုင်ဆိုင်ရန် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက အခက်အခဲ များ၊ အက်ြပအတည်းများနဲ့ စိန်ခေါ်မှုပေါင်းစုံနဲ့ ကျော်လွှာခဲ့ကြရတာကိုလည်း သင်ခန်းစာ များအဖြစ် ရယူကြရ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုသင်ခန်းစာများကို ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး အခြေခံများနဲ့
ပေါင်းစပ်ပြီး မိမိတို့နဲ့ သဟဇာတဖြစ်မယ့် စနစ်တရပ် ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် အမျိုးသားရေး တာဝန် တစ်ရပ်အနေနဲ့ အားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
အမျိုးသားအဆင့် ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေ အတွက် အလွန်ရေးကြီးပါတယ်။
အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမျိုးစုံနဲ့ ပညာရေးအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များ ဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျယ်ပြန့်စွာ ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်နေတာတွေကို လည်း တွေ့မြင်ရပါ တယ်။
ယခုလို ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတွေကနေတစ်ဆင့် များမကြာမီကာလမှာ ရလဒ်
ကောင်းတွေ ရရှိလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လက်တွေ့ ကျပြီး အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များအတွက် ရေရှည်အကျိုးရှိစေမယ့် ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိလာပြီး တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များမှာ ထူးချွန်တဲ့ မြန်မာသားလူငယ်များ လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပညာသင်ဆုအစီအစဉ် ကို ဖွဲ့စည်းထူထောင်သွားဖို့ စီမံထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားတိုးတက်မှု ဖြစ်ထွန်းမှု တစ်ခုအနေနဲ့ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ဖို့ စံနှုန်း လိုအပ် ချက်တွေ မပြည့်ဝမှုတွေကို ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြီး တောင်းဆိုနေကြတဲ့ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး ရှိနေတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။
ယခုလို ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုတွေကတစ်ဆင့် ခေတ်စနစ်နဲ့လျော်ညီတဲ့ ဥပဒေတွေ ပေါ်ထွက်လာရေး တောင်းဆို မှုတွေ ဟာ တစ်ဖက်က မိမိတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို ထင်ဟပ်စေပြီး အပြုသဘောဆောင် တဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေက နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုသစ်ကို အားဖြည့်ပေးရာ ရောက်တယ်လို့ ရှုမြင်ရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
တဖက်မှာလည်း မြေယာကိစ္စနဲ့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက် အခြေချမှု ပြဿနာများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒဖော် ထုတ် မှုတွေနဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မြေယာကိစ္စဟာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ကျော်ဖြတ်ရတဲ့ နိုင်ငံတိုင်း ကြုံတွေ့ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုဖြစ်
ပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အတွက် အခက်အခဲဆုံးနဲ့ အကြပ် တည်းဆုံး စီမံဆောင်ရွက်ရတဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ စီမံချက်များချမှတ်ပြီး မှန်ကန်ဖို့နဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ဖြစ်ဖို့အတွက် အထူးအလေး ထား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါ တယ်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ မြေယာမဲံအိမ်ထောင်စုများကို စာရင်းပြုစုပြီး သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းနှင့်အညီ နေရာချထားဖို့ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရများနဲ့ ပူးပေါင်း စီမံဆောင်ရွက် နေပါ တယ်။
သို့သော်လည်း ဥပဒေမဲ့ တရားမဝင်ကျူးကျော် ဝင်ရောက် အခြေချမှုများကိုတော့ အသေအချာ စိစစ် ကိုင်တွယ်သွားမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဒီလထဲမှာ အာဆီယံအားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မသန်စွမ်း အားကစားပြိုင်ပွဲကိုလည်း ကျင်းပ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်အတွက် ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ အားကစားသမားများ အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဒာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု ဆုံးရှုံးချို့တဲ့သည့်တိုင်အောင် သူတို့ဟာ လူ့အဖွဲ့ အစည်းအတွက် တန်ဖိုးရှိရှိ အလုပ်အကျွေးပြုနိုင်ကြောင်း သက်သေပြတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ လုပ်အားများကို နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး အတွက် သင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာ တာဝန်ယူနိုင်စွမ်း ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ သူတို့ကို လက်တွဲခေါ်ဆောင်ဖို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ လက်ခံကျင့်သုံး လာနိုင်စေဖို့ မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလအတွင်းမှာပဲ အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကို ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ပုဂံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာ အာဆီယံဥက္ကဌတာဝန်ယူပြီး ဒေသတွင်းမှာ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုရမယ့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု၊ ကူးသန်းရောင်း ဝယ်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးနဲ့ နည်းပညာ၊ စတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာ အကျိုးဖြစ် ထွန်းစေမယ့် အလားအလာကောင်းများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
များမကြာမီကာလများမှာ စတင်ကျင်းပဖို့ ပြင်ဆင်လျက်ရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကို အခြေပြုတဲ့ အမျိုး သား ပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် တိုင်းရင်းသားများပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေး
ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စကို စဉ်းစားတဲ့အခါ ၄င်းတို့ရဲ့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရရှိချက်များကို ချန်လှန်မထားခဲ့မိဖို့ သတိပေးတိုက်တွန်း လိုပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားများ၏ အဓိက တောင်းဆိုမှုများဖြစ်သည့် တန်းတူရည်တူရှိရေး၊ ကိုယ်ပိုင်
ပြဌာန်းခွင့် ရရှိရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေး၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဘာသာစကားတို့ကို ထိန်း သိမ်းနိုင်ရေးမှအစပြုပြီး ဖယ်ဒရယ် စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ရေးအထိ ကျယ်
ပြန့်စွာဆွေးနွေးရန် ရည်မှန်းချက်ထား ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့် စွက်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း အစရှိတဲ့ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို မလွဲမသွေ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုပြင်ဆင်ရေး ကိစ္စရပ်များသည်လည်း အခြေခံဥပဒေ အသက်ဝင်ရှင်သန်ရေးအတွက် အဓိကကျတဲ့ ဒီမိုကရေစီတန်ဖိုးများ၊ စံနှုန်းများ ပြည့်မီရေးအစရှိတာတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြရမှာ လည်း ဖြစ် ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော်များ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများ၊ နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့များအားလုံးဟာ ယခုလုပ်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များမှာ အထက်ပါကိစ္စတွေကို ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ထားကြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားအပ်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ယနေ့ မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်လျက်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းသစ်တစ်ရပ် ပီပြင်စွာ ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲများ၊ အကြပ်အတည်းများနဲ့ စိန်ခေါ်မှု များကို အမြင်ကျယ်ကျယ်၊ သဘောထားကြီးကြီးထားပြီး မိမိယုံကြည်တဲ့ နည်းလမ်းများနဲ့ ကြိုးပမ်းရင် ဆိုင် ကျော်လွှားကြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားလိုပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အထူးပြောကြားလိုတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ ကရင်ပြည်နယ် လောခီလာဒေသတွင် မကြာမီကာလက ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ညီလာခံမှာ မတူညီကွဲပြားသည့် သဘောထားရပ်တည် ချက် များနဲ့ အစပြုခဲ့ပြီး အဆုံးမှာ ဘုံရပ်တည်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ အပစ် အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်သည်အထိ ကြိုးပမ်း အားထုတ် ခဲ့ကြတဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ခေါင်းဆောင် များ အားလုံးကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်အနေနဲ့ အထူးသတိပြုမိခဲ့တဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ ထိုညီလာခံမှာ KNU ဥက္ကဌ စောမူတူးစေဖိုး
ပြောကြားခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းရန် “ရဲရဲဝံ့ဝံ့လ က်မှတ်
ရေးထိုး သမိုင်းတင်ကြပါ” ဆိုတဲ့ တိုက်တွန်းပြောဆိုချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းကတော့ မိမိတို့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သမိုင်းအတွက် အလွန်ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို တိုင်းရင်း သားများအားလုံး ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ လက် တွဲကြိုးပမ်းကြရန် ခိုင်မာတဲ့ရပ်တည်ချက်တစ်ရပ် တက် လှမ်းနိုင်ရေးအတွက် တိုက်တွန်းပြောကြားသွားခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ နိုင်ငံရေးရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းသည်ပင်လျှင် အခု ကျွန်တော်ပြောဆိုနေ တဲ့ နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှုသစ်နဲ့ နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းသစ်များ တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး ဤတည်ဆောက်မှုများကနေ ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိမယ်လို့ အမှန်တကယ် ယုံကြည် ကြောင်း ပြောကြား ရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီမိန့်ခွန်း အသံကို အောက်မှာ နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာလူငယ်များ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့်လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အထူးရည်ရွယ်၍ MDGE Japanese School မှ အသစ်ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည့် ဂျပန်ဘာသာ အခြေခံ တန်းခွဲသည် ပြည်တွင်း ပြည်ပရှိ ဂျပန်စက်ရုံ၊ အလုပ် ရုံနှင့် ကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်ဝင်လိုသည့် သူများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်များသို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြား ကြ မည့် ဂျပန်ဘာသာကို သင်ယူတတ်မြောက်ထားလိုသော ရည်မှန်းချက် ကြီးမားသူများအတွက် ဂျပန်ဘာသာနှင့် ပတ်သက်သည့် လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကို ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည့်အပြင် လက်ရှိ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နေသူ များ အတွက် နယ်ပယ်အလိုက် လုပ်ငန်းခွင်သုံး ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများအား အထူးပြု သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သင်တန်းတွင် ဘာသာစကား အပြင် သိထားသင့်သည့် ဂျပန်လူမျိုးများ၏ ဓလေ့စရိုက်နှင့် အထွေထွေ ဗဟုသုတ၊ ရှောင်ရန် ဆောင်ရန်များ၊ ကွန်ပျူတာ အခြေခံရှိထားသူများအတွက် ဂျပန် ဘာသာစာစီစာရိုက်တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းသင်ကြားပေးမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ သင်တန်းတက်ရောက်ပြီး ဂျပန်အစိုးရနှင့်နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု အောင်လက်မှတ်များ ရရှိနိုင်သော ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲများဖြစ်သည့် JLPT နှင့် NET Test စာမေးပွဲများကို ဖြေဆို အောင်မြင်လိုသူများ အတွက်လည်း ပညာရေး လိုအပ်ချက်များအား အပြည့်အဝ ဖြည့် ဆည်း ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခု ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည့် တန်းခွဲသစ်သည် ဂျပန်ဘာသာကို အခြေခံမှစတင်၍ အဆင့်မြင့်တန်းများကိုအထိ တစ်ဆက် တစ်စပ်တည်း တောက်လျှောက် တက်ရောက် သင်ယူသွားနိုင်မည့် တက္ကသိုလ် အဆင့်ပုံစံဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု အောင်လက်မှတ်များ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လုံးဝသင်ကြားထားဖူးခြင်းမရှိသည့် အခြေခံမှ စတင်လေ့လာလိုသူများနှင့် ကိုက်ညီပြီး သင်တန်းချိန်မှာ ဝန်ထမ်းများ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများပါ တက်ရောက်နိုင်ရန် ရုံးချိန်လွတ်သည့် စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ညနေ ၅ နာရီခွဲမှ ၇ နာရီ အထိ သတ်မှတ် ထားကြောင်း သိရသည်။
သင်တန်းတွင် ဂျပန်အစိုးရပညာရေးအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည့် ဂျပန်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ အဆင့်မြင့် နောက်ဆုံးပေါ် သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းများ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများဖြင့် တစ်ဦးချင်း အနီးကပ် ကြီးကြပ်သင်ကြားမည် ဖြစ်သောကြောင့် လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားကြောင်း၊ အသက် ၃၅ နှစ်အောက်ဖြစ်ပြီး ပညာအရည်အချင်းအနေဖြင့် အနိမ့်ဆုံး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ထားပြီး သူ ဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
တန်းခွဲသစ်အား ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်၊ ညနေ ၅ နာရီခွဲတွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ဇန်န၀ါရီလ ၂၉ ရက်နောက်ဆုံးထား၍ MDGE Japanese School တိုက် (၁) ၊ အခန်း (၃၀၃)၊ ရွှေလိပ်ပြာ အိမ်ယာ၊ အောက်ကြည်မြင် တိုင်လမ်းမကြီး၊ ကြည်မြင်တိုင် မြို့နယ်၊ ဖုန်း-၀၉-၇၃၀၀၂၅၁၆၊ ၀၉-၇၃၀၇၈၉၇၂ သို့ ဆက်သွယ်၍ (ရုံးချိန်အတွင်း) သင်တန်း တက်ရောက်လိုသူများ ကိုယ်တိုင် (ဓာတ်ပုံ ၂ ပုံ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ၁ ခုတို့ဖြင့်) ကျောင်းသို့ လာရောက် အပ်နှံရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။